မကျမောစှာဖွငျ့ – My Blog
ပနျးနုရောငျပွေးနသေော ဖွူဖွူဖှေးဖှေးလေး ဖနောငျ့လေးကို အသာအယာကွှ၍ သှယျလြှသော သလုံးသားလေးကို ညငျသာစှာ မွှောကျကွှကာ နောကျထပျ လှကေားထဈတဈခုကို လှမျး၍ တကျလိုကျသညျ။ ထမီစကတျ အောကျနားစတှငျ ခှဲထားသော အကှဲစလေးက ဝဲကနဲ ကှဲဟသှားရာမှ ဖွူဖှေးသော ပနျးနုရောငျ ပွေးနသေညျ့ အသားလေးမြားကို နုညကျလှသော ပေါငျဖြားလောကျထိ တှမွေ့ငျလိုကျရသညျ။ သူမ၏ အောကျဖကျ လှခေါးထဈ ၉ ထဈ ၁၀ ထဈမြှ အကှာမှ လှခေါးပျေါသို့ လိုကျ၍ တကျခဲ့သျောလညျး အရပျ ၅ ပေ ၇ လကျမလောကျရှိသော စညျသူစိုး၏ မကျြနှာက သူမ၏ ပေါငျလုံးမြား နောကျဖကျတှငျ မဉျြးတပွေးတညျး ရှိနသေညျ။ စကပျအကှဲစလေး ဝဲကနဲ ကှဲဟသှားခြိနျတှငျ သာမနျအားဖွငျ့ သူမ၏ ဒူးဆဈလေးမြှကိုသာ တှမွေ့ငျနိုငျရမညျ ဖွဈသျောလညျး လှခေါးအတကျ အဆငျးတှငျ အထကျနှငျ့ အောကျ ဖွဈနသေဖွငျ့ သူမ၏ ပေါငျဖြားလေးထိပငျ တှမွေ့ငျ၍ နခေဲ့ရခွငျးပငျဖွဈသညျ။
ညငျညငျသာသာလေးပငျ တဈလှမျးခွငျး လြှကျေ၍ တကျသှားလသေော သူမ၏ နောကျနားမှ အသာကပျ၍ ပါလာခဲ့ရသော စညျသူစိုး၏ ရငျထဲတှငျ တဖွေးဖွေးပငျ လှိုကျမော၍ လာရပသေညျ။ သူမသညျ စညျသူစိုးတို့ အခနျးရှသေို့ လှမျး၍ ခွထေောကျလေးတဈဖကျကို အတကျလိုကျတှငျ နောကျဖကျခွထေောကျလေးက မကွှမီမှာပငျ သူမ၏ လကျအတှငျးမှ ဆှဲ၍ လာသော ကြောပိုးအိတျလေးကို အသာခလြိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ခါးကို ညှတျကာ အပျေါ လှခေါးထဈသို့ လှမျး၍ တကျလိုကျသော သူမ၏ ခွဖြေားလေးဆီသို့ လကျကလေးနှဈဖကျကို လှမျးလိုကျသညျ။ စညျသူစိုး၏ ရငျထဲတှငျ ဒိနျးကနဲ ဖွဈ၍ သှားရာမှ သူသညျ လှခေါးထဈလေးမြားကို တဆငျ့ပွီး တဆငျ့ လှမျး၍ တကျလာသော သူ၏ ခွလှေမျးမြားကို ရပျတနျ့၍ပငျ ထားလိုကျမိသညျ။ ခွထေောကျလေးနဈြဖကျက အပျေါ ဆငျ့သို့ လှမျး၍ တကျထားပွီး ခါးကို ကုနျးလိုကျသညျတှငျ သူမ၏ နောကျဖကျ အောကျလှခေါးထဈတှငျ ရှိ၍ နသေော စညျသူစိုးသညျ ကှဲဟ၍ သှားသော သူမ၏ စကတျအကှဲလေးမှတဆငျ့ မွှောကျကွှ၍ ထားသော သူမ၏ ခွထေောကျလေးကို ပေါငျရငျးထိပငျ သဲကဲစှာ မွငျတှနေ့ရေသညျ။
အရဈလိုကျလေး ဖွဈနသေော သူမ၏ ပေါငျရငျလေးတှငျ အသားစိုငျလေးမှာ တဈ၍ နသေညျ။ ဝတျထားသော အတှငျးခံဘောငျးဘီ ပနျးနုရောငျလေးကိုပငျ မွငျတှလေို့ကျရသညျ။ ကသေီခြိုသညျ သူမ၏ လကျလေးနှဈဖကျဖွငျ့ ခွထေောကျလေးရှိ ဘိနပျသိုငျးကွိုးလေးကို ဖွညျကာ ပွနျ၍ တပျနသေညျ။ စညျသူစိုး၏ လညျခြောငျးတဈလြောကျ ခွောကျသှေ့၍ လာရသညျ။ စညျသူစိုး ကြောငျးအပွနျကို မြှျောရငျး တိုကျခနျးတံခါးကို အသာဟကာ ကွညျ့လိုကျမိသော ခငျမိုးလှငျ တဈယောကျ ငယျရာမှ ကွီးလာသူပီပီ ကသေီခြိုတဈယောကျ စညျသူစိုးကို ပညာပွ၍ နခေပြွေီကို အတတျသိလိုကျသညျ။ စညျသူစိုး၏ အကွညျ့တှကေလညျး ကောငျမလေး၏ နောကျဖကျဆီမှ မခှာခြေ။ အသားခပျလတျလတျလေးဖွငျ့ ဖှေးဖှေးရေးရေးလေးဖွဈ၍ နသေော စညျသူစိုး၏ မကျြနှာလေးသညျပငျလညျး နီမွနျး၍ ထူအမျးအမျး ဖွဈနသေညျကို ခငျမိုးလှငျတှလေို့ကျရသညျ။
သူမသညျ လေးတှဲ့သော သကျပွငျးလေးတဈခကျြခကြာ လကျနှဈလုံးမြှသာ ဟထားသော တံခါးကို ပွနျ၍ ပိတျလိုကျလတေော့သညျ။ ဖိနပျသိုငျးကွိုးလေးကို ပွနျ၍ တပျပွီး ပွနျတော့ ကသေီခြိုသညျ ဘေးတှငျ ခထြားသော သူမ၏ ကြောပိုးအိတျလေးကို ကောကျယူလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ စညျသူစိုးတို့၏ တိုကျခနျးတံခါးရှကေကို ဖွတျကြျော၍ တဈဆဈခြိုး လှကေားထဈမြားပျေါသို့ တကျရောကျ၍ သှားလတေော့သညျ။ စညျသူစိုးသညျ လှကေားထဈမြားကို ဆကျ၍ တကျလာရငျးက သူ၏ တိုကျခနျးတံခါးရှသေို့ အရောကျ လှကေားထဈမြားကို ဆကျလကျတကျလှမျးသှားပွီဖွဈသော ကသေီခြိုထံသို့ လှမျး၍ အကွညျ့လိုကျတှငျတော့ နဈြနှဈခြိုကျခြိုကျ ပွုံးပွလိုကျသောသူမ၏ လှပသော အပွုံးလေးကို တှလေို့ကျရပွီး မို့ဖောငျးသော သူမ၏ ပါးပွငျလေးတဈဖကျတှငျ ခှကျ၍ သှားရသညျ့ ပါးခြိုငျ့လေးကို မကျမောစှာဖွငျ့ပငျ ငေး၍ ကွညျ့နစေဉျမှာပငျ ကသေီခြို၏ မကျြနှာလေးမှာ ငုံ့၍ သှားရာမှပငျ ခတ်ေတမြှ ရပျတနျ့၍ ထားလိုကျရသော သူမ၏ ခွထေောကျလေးမြားကို စတငျ၍ ရှလြေ့ားလိုကျပါတော့သညျ။
ဟငျးအိုးကို မီးဖိုပျေါ တှငျတငျကာ အပူပေး၍ နသေော ခငျမိုးလှငျ၏ မကျြလုံးတှငျ စောစောက သူမတှမွေ့ငျခဲ့ရသော စညျသူစိုးနှငျ့ ကသေီခြိုတို့၏ အဖွဈအပကျြကလေးကို ပွနျ၍ မွငျယောငျမိနသေညျ။ ခငျမိုးလှငျ စဉျးစားလိုကျသညျ။ သူတို့နှဈယောကျ ကွိုကျနကွေသညျတော့ မဟုတျသေး။ ပွီးတော့ သားဖွဈသူ စညျသူစိုးကို ခုမှ သသေခြောခြာ ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ အရပျကလညျး ၅ ပေ ၇ လကျမ လောကျရှိမညျ။ လကေ့ငျြ့ခနျး နတေို့ငျးယူကာ ကစားထားသော စညျသူစိုး၏ ရငျအုပျကွီးတှကေ ဖုထဈ မို့မောကျ၍နသေညျ။ လကျမောငျးသားကွီးတှကေလညျး ကွှကျသားတှေ အမွောငျးလိုကျ ထ၍ နသေညျ။ နုနုငယျငယျ မကျြနှာလေးနှငျ့ယောကျြားကွီး တဈယောကျလို သနျမာထှားကြိုငျးလှသော ကိုယျလုံး ကိုယျထညျရှိသညျ။ အသကျ ၁၇ နှဈ ကြျောကြျောသာ ရှိသေးသော စညျသူစိုး၏ ရုပျသှငျသညျ မိနျးမသားမြားအဖို့ အကွိုကျတှစေ့ရာပငျ။ ဟိုကသေီခြို ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးကလညျး လှနျလှနျးသညျ။ ဒီလောကျထိအောငျပငျ လုပျပွ၍ စညျသူစိုးကိုမွူဆှယျနသေညျ။
လှနျကို လှနျလှနျးသညျ။ ခငျမိုးလှငျသညျ စညျသူစိုးကို သဝနျတိုစိတျတှကေ တဖှားဖှားပငျ သူမ၏ ရငျတှငျ ပျေါ ပေါကျ၍ လာရပါတော့သညျ.. “မာမီ ဘာခကျြ” ထုံးစံအတိုငျးပငျ ညနေ ကြောငျးက ပွနျလာလတေိုငျး ဝါးတားကူလာမှ ရတေဈခှကျကိုထညျ့ကာ သောကျရငျးမှ စညျသူစိုး မေးနကွေ မေးခှနျးပငျ ဖွဈသညျ။ “သားကွိုကျတဲ့ ငါးခေါငျးဟငျးခြိုရယျ ကွကျသားကွျောရယျ နောကျ ကွကျအသဲအမွဈနဲ့ အစိမျးကွျောတဈခှကျ ကွျောထားတယျ” “ဟာ ဒါမှ တို့မာမီကှ” “အို ဟဲ့ ဟဲ့ ကောငျလေး အျော ခကျလိုကျတာ” ဝမျးသာအားရဖွဈ၍ သှားသော စညျသူစိုးက ခငျမိုးလှငျကို နောကျကြောမှ တအားသိုငျး၍ ဖကျပွီး ခငျမိုးလှငျ၏ လညျတိုငျလေးနှငျ့ ဂုတျပိုးလေးတှအေပွငျ ပါးပွငျလေးတှကေိုပါ နမျးနတေော့သညျ။ “ကဲ ဒီလောကျတောငျ ဖွဈတဲ့ကောငျလေး သိမယျ ကဲ . . ကဲ . . ကဲ . . ” ခငျမိုးလှငျသညျ နောကျသို့ ပွနျလှညျ့ကာ စညျသူစိုး၏ ကိုယျလုံးကို အတငျးပငျ ပှဖေ့ကျ၍ စညျသူစိုး၏ ပါးပွငျတှသောမက သူ၏ ရငျအုပျ ဖေါငျးဖေါငျး ကားကားကွီးတှကေို အတငျးပငျ ဖိ၍ နမျးပဈလိုကျတော့သညျ။
ဒီမှာတငျ စညျသူစိုးကလညျး ခငျမိုးလှငျ၏ ခါးကို မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ဆှဲ၍ အတငျးဖကျလိုကျပွီး ခငျမိုးလှငျနမျးသလိုပငျ သူမ၏ မကျြနှာတငျမက ရငျသားမို့မို့ မောကျမောကျကွီးတှကေိုပါ အတငျးပငျ ဖိ၍ ဖိ၍ နမျးပဈလိုကျလတေော့သညျ။ “အို . . အို . . ” ခငျမိုးလှငျသညျ ထိုသို့ မွညျတမျးလိုကျမိပွီး စညျသူစိုး၏မကျြနှာက သူမ၏ ရငျသားကွီးတှမှေ အကွှတှငျတော့ စညျသူစိုး၏ ကိုယျလုံးကို ဆှဲ၍ သူမ၏ ရငျသားဆိုငျကွီးမြားကို စညျသူစိုး၏ ရငျအုပျကယျြကွီး ပိပွားသှားရလောကျအောငျပငျ ဖိကပျကာ ဖကျလိုကျပွီး ပါးခငျြးအပျ၍ ဖကျထားလိုကျမိပါတော့သညျ။ ထိုစဉျမှာပငျ စညျသူစိုး၏ မို့မောကျသော ရငျအုပျကယျြကွီးအောကျမှ တဒိနျးဒိနျးဖွငျ့ ခုနျ၍နသေော ရငျခုနျသံမြားကို ခငျမိုးလှငျသညျ သတိပွုမိလိုကျသညျ။ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ ခပျကွာကွာလေး ဖကျထားကွပွီးတော့မှ ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ ကိုယျလုံးကို စညျသူစိုး၏ ရငျခှငျတှငျးမှ ခှာ၍ ထှကျလိုကျသညျ။
“သား ဒီနညေ့နေ လကေ့ငျြ့ခနျး မလုပျနဲ့တော့ တခါထဲသာ ရခြေိုးလိုကျတော့ မာမီ ထမငျးဆာနပွေီ . . သားရေ ခြိုးပွီးရငျ တခါထဲ ထမငျးစားလိုကျကွမယျနျော ဟုတျလား . . ” “အငျး . . သား ရသှေားခြိုးတော့မယျ” ပွောရငျး ဆိုရငျး လှညျ့၍ ထှကျသှားသော စညျသူစိုး၏ ကြောပွငျကွီးကို ခငျမိုးလှငျသညျ နောကျမှနေ၍ ငေးကာ ကွညျ့နမေိသညျ။ စညျသူစိုးတဈယောကျ လူလားမွောကျ၍ ယောကျြားကွီး လုံးလုံးပငျ ဖွဈ၍ နလေပွေီ။ စောစောက စညျသူစိုး ဝငျလာစဉျက ရသေောကျအပွီး သူမကို နောကျကြောမှနေ၍ တငျးကွပျစှာ ပှဖေ့ကျလိုကျစဉျက သူမ၏ ဖငျသားကွီးတှပေျေါ သို့ ထိထိမိမိလာပွီး ထောကျလိုကျခဲ့သော စညျသူစိုး၏ ပစ်စညျးကွီးက နဲနဲနောနောမဟုတျ။ ပွီးတော့ မာကွောသနျမာလိုကျတာလညျး မပွောပါနှငျ့တော့။
စပွီး နောကျမှနေ ဖကျလိုကျတော့ သူ့ဟာကွီးက ဒိုငျးကနဲ သူမ၏ တငျသားကွီးတှပေျေါ ကို ထောကျလိုကျသညျဆိုသညျနှငျ့ ခငျမိုးလှငျ၏ ခါးလေးသညျ ရှကေသို့ပငျ ကော့ကနဲ တကျ၍ သှားရလသေညျ။ ပွီးတော့မှ သူ့ဟာကွီးက မာကွောလှနျးလှသဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျ နှဈခုတို့ ဖိကပျမိစဉျတှငျ အောကျသို့ စိုကျ၍ ကမြသှားပဲ အပျေါ သို့ ခြျော၍ ထိုးတကျသှားကာ သူမ၏ တငျသားကွီးတှပေျေါ အခြောငျးလိုကျ ကပျနခေတြေော့သညျ။
ဒါ . . ဒါ စောစောက လှခေါးမှာ ကသေီခြိုဆိုတဲ့ ကောငျမလေးကို ကွညျ့ပွီး ထောငျထလာခဲ့တဲ့ ဟာကွီးပဲ ဖွဈရမညျ။ ခုထိပငျ အစှမျးကုနျ မာကွောလို့နသေေးသညျ။ တျောတော့ကို သနျမာလှသညျပဲ။ ခငျမိုးလှငျသညျ မီးဖိုဘကျကို ပွနျ၍ လှညျ့လိုကျရာက မီးဖိုခလုတျကို ပိတျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ဖိုပျေါ မှ ဟငျးခြိုအိုးကို အဖုံးပိတျပွီး မီးဖိုဆောငျမှ ထှကျ၍ လာခဲ့တော့သညျ။ ထိုနောကျ အိပျခနျးထဲသို့ ရောကျ၍ လာသော ခငျမိုးလှငျသညျ ခေါငျးအုံးအောကျမှ သော့တှဲကို ဆှဲထုတျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ နံရံကပျဘီရိုဆီသို့ သှားပွီး အံဆှဲတဈခုကို သော့ဖှငျ့၍ ဆှဲထုတျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ အံဆှဲထဲမှ ထှကျပျေါ ၍ လာသော ဗီစီဒီခပျြမြားကို တဈခပျြခွငျး ကွညျ့ကာ ဗီစီဒီ ၂ ခပျြကို ရှေးထုတျလိုကျလသေညျ။ ပွီးတော့ အံဆှဲကို ပွနျပိတျပွီး သော့ခတျကာ သော့တှဲကို ခေါငျးအုံးအောကျသို့ ပွနျ၍ ထားလိုကျပွီးမှ ခငျမိုးလှငျသညျ ဧညျ့ခနျးထဲသို့ ထှကျ၍ အလာတှငျ ရခြေိုးခနျးထဲမှ ရခြေိုးနသေော စညျသူစိုး၏ သီခငျြးသံ အေးအေးကို ကွားလိုကျရလသေညျ။
ခငျမိုလှငျတဈယောကျဧညျ့ခနျးထဲသို့ရောကျတော့ သူမ၏ လကျအတှငျးတှငျ ပါ၍လာသော ဗီစီဒီ ၂ ခပျြကို အခွား ဗီစီဒီခပျြတှေ၏ အပျေါ ယံတှငျ တငျထားလိုကျပွီး မီးဖိုဖကျသို့ ခပျသှကျသှကျလေးပငျ ပွနျ၍ လာခဲ့တော့သညျ။ ရခြေိုးခနျးထဲမှ စညျသူစိုး၏ သီခငျြးသံကတော့ ခပျသဲ့သဲ့ လှငျ့ပြံ့ဆဲပငျ ဖွဈသညျ။ ရခြေိုးခနျးတံခါးရှတှေ့ငျ ရပျလိုကျပွီးတော့မှ ခငျမိုးလှငျသညျ တှေ၍ သှားရသညျ။ ပွီးမှ သကျပွငျးလေးတဈခကျြ ခလြိုကျပွီး သူမ၏ လကျတဈဖကျက ရခြေိုးခနျးတံခါးပျေါ ရှိ ဒိုးလော့ကို အသာလေး လှညျ့ဖှငျ့လိုကျလသေညျ။ အတှငျးက ဘယျတော့မှ လော့မခထြားသညျကို ခငျမိုးလှငျက သိပွီးသားပငျဖွဈ၏။ ဒိုးလော့ကို လှညျ့ဖှငျ့လိုကျပွီးတော့မှ ခငျမိုးလှငျသညျ တံခါးကို အသာလေး ဟလိုကျသညျ။
“ဟငျ . . မာမီ” “ရော့ သား ဆပျပွာ အထဲမှာ ဆပျပွာ ကုနျခါနီးနပွေီမို့လား . . သားမလောကျမှာစိုးလို့” ခုလေးတငျ မီးဖိုဆောငျထဲရှိ နံရံကပျဘီရိုထဲမှ ထုတျယူလာခဲ့သော ဆပျပွာမှေးတဈတုံးကို လှမျး၍ ပေးလိုကျလသေညျ။ စညျသူစိုးတဈယောကျ ကိုယျလုံးတီးဖွငျ့ ရခြေိုးနရောမှ ရခြေိုးခနျးတံခါးဝရှိ သူမထံသို့ လြှောကျ၍ လာလသေညျ။ ဆပျပွာတုံး ကိုငျထားသော ခငျမိုးလှငျ၏ လကျလေးသညျ တုနျတုနျယငျယငျလေး ဖွဈ၍ နလေသေညျ။ အနားရောကျတော့ ခငျမိုးလှငျ၏ လကျထဲမှ ဆပျပွာကို ယူ၍ လှညျ့ဝငျသှားလတေော့သညျ။
ဒီတော့မှ ခငျမိုးလှငျက သတိရပုံဖွငျ့ “သားမွနျမွနျခြိုးနျော အအေးပတျနဦေးမယျ ပွီးတော့ မာမီလညျး ခြိုးအုံးမှာ” “ဟုတျကဲ့ သားပွီးတော့မှာပါ . . .” ရခြေိုးခနျးတံခါးကို ပွနျပိတျပွီးသညျနှငျ့ လှညျ့၍ ထှကျလာသော ခငျမိုးလှငျသညျ သောကျရေ အေးအေးလေးတဈခှကျကို အပွေးအလှားလေး သောကျလိုကျမိသညျ။ စညျသူစိုးတဈယောကျ ရခြေိုးပွီး၍ ရခြေိုးခနျးထဲမှ လှမျး၍ အထှကျတှငျတော့ အပွငျတှငျ ထမီရငျလြားဖွငျ့ ရပျ၍ နသေော ခငျမိုးလှငျကို တှလေို့ကျရသညျ။ စညျသူစိုး ရခြေိုးခနျးထဲမှ လှမျး၍ အထှကျမှာပငျ ခငျမိုးလှငျက ရခြေိုးခနျးထဲသို့ လှမျး၍ ဝငျလိုကျလသေညျ။ စညျသူစိုးက ခေါငျးညိတျပွ၍ ထှကျသှားလသေညျ။ ခငျမိုးလှငျကတော့ စညျသူစိုးကို ကြောခိုငျးပွီး ရခြေိုးခနျးထဲသို့ လှမျး၍ ဝငျသှားလသေညျ။ ခဏမြှအကွာတှငျတော့ စညျသူစိုး၏ အသံက ရခြေိုးခနျးတံခါးဝမှ ထှကျပျေါ ၍ လာသညျ။ စောစောကထဲက ခငျမိုးလှငျမှာ ရခြေိုးခနျးတံခါးကို ပိတျ၍ မထားခဲ့ပေ။
“မာမီ . . ဒီမှာ ဘီး . . ” “ခဏလေး . . ခဏလေး . . ” ရခြေိုးခနျးထဲရှိ မှနျရှတှေ့ငျ ကိုယျလုံးတီးဖွငျ့ ရပျကာ မကျြနှာကို ဆပျပွာဖွငျ့ ပှတျတိုကျနသေော ခငျမိုးလှငျက လှမျး၍ ပွောလိုကျသညျ။ ပွီးတော့မှ သူမ၏ မကျြနှာပျေါ မှ ဆပျပွာမြားကို ရဖွေငျ့ဆေးကာ မကျြနှာသဈလိုကျပွီး ဆပျပွာမြား စငျကွယျသှားတော့မှ မကျြနှာပျေါ ရှိ ရမြေားကို လကျတဈဖကျဖွငျ့ သပျလိုကျရငျး ခငျမိုးလှငျသညျ ရခြေိုးခနျးဝသို့ လြှောကျ၍ လာသညျ။ စညျသူစိုး၏ လကျထဲမှ ဘီးကို လှမျး၍ အယူလိုကျတှငျတော့ စူးရှ တောကျပွောငျ၍ အရညျလဲ့နသေော စညျသူစိုး၏ မကျြလုံးမြားနှငျ့ ဘီးကို ကိုငျ၍ လှမျးပေးနသေော တဆတျဆတျဖွငျ့ သိသိသာသာ တုနျခါနသေညျ့ စညျသူစိုး၏ လကျဖြားလေးတို့ကို ခငျမိုးလှငျသညျ သတိထားမိလိုကျပါတော့သညျ။
ခငျမိုးလှငျ၏ အသကျသညျ ၃၄ နှဈထဲသို့ ခငျြးနငျးဝငျရောကျ လာခဲ့ပပွေီဖွဈသညျ။ လှနျခဲ့သော ၅ နှဈကြျောကပငျ ခငျပှနျးဖွဈသူ ဦးမောငျမောငျစိုးသညျ ကှယျလှနျသှားခဲ့ရသညျ ဖွဈသညျ။ ငယျစဉျ ကြောငျးသူဘဝထဲက သူမ၏ အခြောအလှတှကွေောငျ့ ခငျမိုးလှငျ၏ ဝနျးကငျြတှငျ ယောကျြားတို့မှာ ပြားပိတုနျးမြားပမာ တရဈဝဲဝဲဖွငျ့ ရှိခဲ့ရလသေညျ။
ဒီကွားထဲကမှ ခငျမြိုးလှငျသညျ ဦးမောငျမောငျစိုးနှငျ့ အကွောငျးပါ၍ လကျဆကျခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။ ဝငျးဝါသော ရှဝေါရောငျ အသားအရညျလေးနှငျ့ အရပျအမွငျ့က ၅ ပေ ၆ လကျမလောကျရှိပွီး အရပျအမွငျ့နှငျ့ လိုကျလြောုညီထှသေော လှပတောငျ့တငျးသညျ့ အခြိုးအစား ကနြလှသော ကိုယျလုံးပိုငျရှငျ တဈယောကျဖွဈခဲ့၍လညျး အထကျတနျးကြောငျးသူ ဘဝ၌ပငျ ကာယအလှမယျဘှဲ့ကို တဈကွိမျမက ဆှတျခူးရရှိခဲ့ သူလညျး ဖွဈသညျ။ သညျ့နောကျပိုငျး အိမျထောငျကပြွီးသညျ့ အခြိနျတှငျလညျး သူမ၏ အလှအပမြားကို ခငျမြိုးလှငျသညျ ထိနျးသိမျး၍ ထားနိုငျခဲ့လသေညျ။ နာမညျကြျော ကုမ်ပဏီကွီးတဈခု၏ မနျနဂြောကွီးဖွဈသော ဦးမောငျမောငျစိုးက ခငျမြိုးလှငျကို မပူမပငျ မကွောငျ့မကြ ထားနိုငျခဲ့သညျဖွဈ၍ ငွိမျးငွိမျးနေ ကောငျးကောငျးစားကာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပိုးမှေးသလိုမှေး၍ ခငျမိုးလှငျတဈယောကျ လှခငျြတိုငျးလှ၍ နခေဲ့လသေညျ။
ရငျးနှီးသူတခြို့ကဆိုလြှငျ အပြိုတုနျးကထကျပငျ ပို၍ လှလာသေးသညျဟုခြီမှမျးထောပနာပငျ ပွုကွရသညျ။ အပြိုဘဝကပငျစ၍ အိမျထောငျကပြွီးအခြိနျ။ ထို့နောကျ ခငျပှနျးသညျ ကှယျလှနျပွီးသညျ့ အခြိနျနောကျပိုငျးတို့တှငျလညျး ယခုအခြိနျထိပငျ ခငျမိုးလှငျသညျ ကနျြးမာရေးကို အထူးပငျ ဂရုစိုကျခဲ့သညျ။ ကာယအလှ လကေ့ငျြ့ခနျးလညျး ယနထေိ့ မပကျြခဲ့ပေ။ ဒီတော့ ယခုဆိုလြှငျ ခငျမိုးလှငျသညျ အင်ျဂါစုံလငျစှာဖွငျ့ အစှမျးကုနျ ပှငျ့နသေညျ့ ပနျးတဈပှငျ့နှယျ ငှါးငှါးစှငျ့စှငျ့ဖွငျ့ တငျ့တယျစှာ လှပ၍ နရေလသေညျ။
မုဆိုးမလေး ခငျမိုးလှငျကို လိုခငျြသူတှကေ ဒုနှငျ့ဒေးရှိသညျ။ ဒါပမေယျ့ ကှယျလှနျသှားပွီဖွဈသော ခငျပှနျးဖွဈသူ ဦးမောငျမောငျစိုးက ပစ်စညျးဥစ်စာ ငှကွေေးမြား လုံလောကျစှာ ထားခဲ့သညျ့အပွငျ ဦးမောငျမောငျစိုး ရှိနစေဉျကပငျ ယုံကွညျစိတျခရြ၍ အကြိုးအမွတျရှိသော လုပျငနျးမြားတှငျ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုမြား ပွုလုပျထားခဲ့သညျဖွဈ၍ ရရှိသော အကြိုးအမွတျမြားမှာ သူမတို့အတှကျ အလြှံအပယျ ဖွဈနခွေငျးနှငျ့ စညျသူစိုး၏ နောငျရေးတို့ကွောငျ့ ခငျမိုးလှငျသညျ ကမျးလှမျးလာသူ ဟူသမြှတို့ကို လကျမခံပဲ ငွငျးပယျခဲ့သညျခညျြးပငျ ဖွဈသညျ။ ခငျမိုးလှငျနှငျ့ သူမ၏ ခငျပှနျး ဦးမောငျမောငျစိုးတို့သညျ ကံတူ အကြိုးပေးမြားဟု ဆိုနိုငျသူမြားဖွဈပါသညျ။
ဦးမောငျမောငျစိုးသညျ တဈဦးတညျးသောသားဖွဈ၍ မိတဆိုး တဈယောကျလညျးဖွဈ၏။ ဖခငျဖွဈသူမှာလညျး ပွညျပသို့ အပွီးအပိုငျ ထှကျခှာသှားခဲ့ပွီး ပွညျပတှငျပငျ အိမျထောငျကလြကျြရှိနပေပွေီ။ ခငျမိုးလှငျသညျလညျး တဈဦးတညျးသော သမီးဖွဈ၍ ဖတဆိုးတဈယောကျဖွဈကာ မိခငျဖွဈသူမှာလညျး သူမ အိမျထောငျကပြွီး တဈနှဈခနျ့အကွာတှငျ ကှယျလှနျ၍ သှားခဲ့ပွီး ဖွဈသညျ။ ယခုတော့ ခငျပှနျးဖွဈသူ ဦးမောငျမောငျစိုးကပါ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။ ယခုတော့ ခငျမိုးလှငျသညျ လောကအလယျတှငျ မကျြစသေူ့ငယျ နားသူငယျဖွငျ့ ကနျြရဈခဲ့သော စညျသူစိုးကိုသာ ပွုစုစောငျ့ရှောကျရငျးဖွငျ့ သူမ၏ နရေ့ကျမြားကို အေးခမျြးသာယာစှာဖွငျ့ ကုနျလှနျစေ ခဲ့လသေညျ။
ယခုဆိုလြှငျ စညျသူစိုးသညျ ၁၀ တနျးပငျ အောငျမွငျပွီးဖွဈ၍ မကွာမီ လပိုငျးတှငျ တက်ကသိုလျမြား ပွနျလညျဖှငျ့လှဈပါက ပထမနှဈသို့ တကျရမညျဖွဈပွီး ယခု အားလပျရကျတှငျ အင်ျဂလိပျစကားပွော သငျတနျးသို့ တကျရောကျနခွေငျးဖွဈသညျ ဖတဆိုးလေးဖွဈသော စညျသူစိုးကို ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ ကိုယျတိုငျလညျး ငယျစဉျ ကလေးဘဝထဲက ဖတဆိုးလေး ဖွဈခဲ့ရသူဖွဈ၍ အတျောပငျ စာနာမိကာ ခါတိုငျးထကျပငျ ပို၍ ဂရုတစိုကျဖွငျ့ ခဈြခငျယုယကာ ပွုစုလာခဲ့ရသညျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ စညျသူစိုး၏ အနှံအတာကို ရငျစညျးပွီးခံခဲ့သညျ။ စညျသူစိုး မကျြနှာ တဈခကျြ မညှိုးစရေ။ စညျသူစိုး လကျညှိုးညှနျသမြှ တောငျးတသမြှ အဆငျသငျ့ဖွဈအောငျ သူမသညျ ဖနျတီးပေးခဲ့သညျခညျြးပငျ ဖွဈသညျ။
စညျသူစိုးကလညျး လိမ်မာရေးခွားရှိသူ ကလေးတဈယောကျဖွဈပွီး ခငျမိုးလှငျ ပွောသမြှ ဆိုသမြှကို ခေါငျးငွိမျ့ လိုကျနာခဲ့သညျခညျြးပငျဖွဈသညျ။ ပွီးတော့လညျး စညျသူစိုးသညျ ခငျမိုးလှငျကို အတျောပငျ ခဈြရှာသညျ။ ဤသို့ဖွငျ့ပငျ ဦးမောငျမောငျစိုး ကှယျလှနျပွီးခဲ့သညျ့ နရေ့ကျမှစ၍ တဈယောကျကို တဈယောကျ တှယျတာ အားကိုးစိတျမြားဖွငျ့ အခြိနျကာလမြားကို ဖွတျသနျး ကြျောဖွတျလာခဲ့သညျမှာ ယနအေ့ခြိနျထိပငျ ဖွဈသညျ။ အိပျခနျးထဲရှိ ဒရငျးဘကျပျေါ တှငျ လှဲကာ မဂ်ဂဇငျးဖတျ၍ နသေော ခငျမိုးလှငျသညျ မဂ်ဂဇငျးစာအုပျကို ပိတျ၍ ဘေးရှိ စားပှဲလေးပျေါ သို့ တငျလိုကျသညျ။
ပွီးတော့ ဒရငျးဘကျပျေါ မှ ထလိုကျရငျး အိပျခနျးနံရံမှ နာရီကို ကွညျ့လိုကျတော့ ည ၁၁ နာရီပငျ ရှိပပွေီ။ အိပျခနျးဝသို့ သှား၍ အပွငျသို့ ကိုယျတခွမျးထှကျကာကွညျ့လိုကျတော့ စညျသူစိုးတဈယောကျ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ ဗိစီဒီ ကွညျ့၍ ကောငျးနဆေဲပငျ ဖွဈသညျကို တှလေို့ကျရ၍ ခငျမိုးလှငျသညျ အိပျခနျးထဲသို့ ပွနျ၍ ဝငျလာခဲ့ပွီး စညျသူစိုး၏ကုတငျဆီသို့သှား၍ ကုတငျထကျရှိ အိပျယာလေးကို ပွငျဆငျ၍ ပေးလိုကျလသေညျ။ ခငျမိုးလှငျတို့ အိပျခနျးကွီးမှာ အလြား ၂၅ ပနှေငျ့ အနံ ၁၂ ပမြှေရှိသော အိပျခနျးကယျြကွီးပငျဖွဈသညျ။ အိပျခနျးအလြား၏ အလယျတှငျ အိပျခနျးဝငျပေါကျရှိကာ ထိုဝငျပေါကျကို ဗဟိုပွု၍ တဈဖကျခွမျးမှာ စညျသူစိုး၏ အိပျခနျးဖွဈသညျ။ ကနျြတဈဖကျခွမျးမှာ ခငျမိုးလှငျ၏ အိပျခနျးဖွဈသညျ။
အိပျခနျးဝငျပေါကျရှိရာ နံရံနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျရှိ နံရံကို ခေါငျးရငျးပွုပွီး ကုတငျနှဈလုံးကိုယှဉျလကျြသား ခထြားပွီး ထိုကုတငျနှဈလုံး၏ အကွားတှငျ ခေါကျကာလေးတဈခုဖွငျ့ ဟိုဖကျခွမျးဒီဖကျခွမျး ပိုငျးခွား၍ ထားလသေညျ။ စညျသူစိုး၏ ကုတငျလေးမှာ တဈယောကျအိပျ ကုတငျဖွဈပွီး ခငျမိုးလှငျကတော့ ခငျပှနျးဖွဈသူ ရှိစဉျကတညျးက အတူအိပျခဲ့သညျ့ နှဈယောကျအိပျ ကုတငျကွီးဖွငျ့ပငျအိပျသညျ။ သူတို့နှဈယောကျ၏ ကုတငျနှဈလုံးကွားတှငျ တဈဖကျနှငျ့ တဈဖကျ ပိုငျးခွားထားသော ခေါကျကာလေး တဈခုသာ ကွားတှငျခံပွီး ကုတငျနှဈလုံးမှာ ထိစပျ၍နကွေသညျ။ စညျသူစိုး၏ အိပျယာလေးကို ခငျးကငျြးပွီးသှားသော အခါတှငျတော့ ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ အခနျးဖကျသို့ ပွနျ၍ လာခဲ့ပွီး သူမ၏ ကိုယျပျေါ မှ အဝတျအစားမြားကို ခြှတျကာ ညဝတျ အင်ျကြီလေးကို တဈထပျတညျး ဝတျလိုကျသညျ။
ပွီးတော့ ကုတငျလေးနှဈလုံးကွား ခေါကျကာလေး၏ ထိပျ အပျေါ ဖကျနံရံတှငျရှိသော ညအိပျမီးလုံး အပွာရောငျလေးကို ဖှငျ့လိုကျသညျ။ ပွီးတော့မှ အိပျခနျးထဲရှိ မီးမြားကို ပိတျလိုကျပွီး သူမ၏ ကုတငျပျေါ သို့ တကျ၍ လှဲလိုကျလသေညျ။ လကျပှနျးတတီးနခေဲ့ပွီးမှ သူမ၏ မကျြလုံးထဲတှငျ ကလေးဟုသာ မွငျနခေဲ့သော စညျသူစိုးတဈယောကျ ညနကေ ကသေီခြိုနှငျ့ တခဏအကွာ လူငယျသဘာဝ စိတျကစားနကွေသညျကို တှလေို့ကျရတော့မှ စညျသူစိုးတဈယောကျ လူလားမွောကျခဲ့ရပွီဆိုသညျကို သတိထားလိုကျမိခဲ့သညျ။ ပွီးတော့ ဆနျ့ကငျြဖကျလိငျအပျေါ တှငျ တပျမကျသညျ့ စိတျမြားပငျဝငျ၍ နခေပြွေီ။
ဒီတော့လဲ လိငျကိစ်စတှကေို ဗဟုသုတ အလို့ငှာ မွငျဖူးတှဖေူ့းပါ စတေော့ဟု ရညျရှယျ၍ ဗီစီဒီ ၂ ခပျြကို စညျသူစိုး အလှယျတကူ တှေ့၍ ကွညျ့မွငျသှားစရေနျ ခငျမိုးလှငျသညျ စီစဉျ၍ ခထြားခဲ့မိသညျ တဆကျတညျးမှာပငျ ရခြေိုးနစေဉျ သူမ တှမွေ့ငျခဲ့ရသော စညျသူစိုး၏ လိငျတနျကွီးကသူမ၏ အမွငျအာရုံထဲသို့ ရောကျရှိလာသညျ။ အရှညျ ၇ လကျမလောကျနှငျ့ လုံးပတျက ကပျြလုံးခနျ့ရှိသညျ။ ထိပျက အရပွေားလေးက ဟတယျ ဆိုရုံလေးသာ ရှိသေးသညျ။ ရခြေိုးခနျးဝမှ ဆပျပွာလှမျး၍ ပေးနသေော သူမ၏ ထံသို့ လြောကျ၍ လာတော့ လိငျတနျကွီးမှာ တရမျးရမျးနှငျ့ သူမဆီသို့ ခဉျြးကပျလာသညျကို ကွညျ့မိပွီး ခငျမိုးလှငျတဈယောကျ ရခြေိုးပွီးသညျမှာ တဈနာရီလောကျပငျရှိသျောလညျး ခကျြခွငျးပငျ ရပွေနျခြိုး၍ သူမ၏ ကိုယျလုံးတီး ခန်ဓာကိုယျကို စညျသူစိုးမွငျအောငျ ပွနျ၍ ပွခဲ့မိသညျကို ခငျမိုးလှငျသညျ သူမဘာသာပငျ အံသွနရေလသေညျ။
ယခုတော့ စညျသူစိုးတဈယောကျ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ တဈယောကျတညျး ထိုငျ၍ ခငျမိုးလှငျထားခဲ့သော အပွာကား ဗီစီဒီခပျြတှကေို ကွညျ့နမေညျမှာသခြောသညျဟု ခငျမိုးလှငျသညျ တှေးမိလိုကျပါတော့သညျ။ အိပျယာပျေါ တှငျမှေး၍နသေော ခငျမိုးလှငျသညျ ဘယျအခြိနျ အိပျပြျောသှားခဲ့သညျ မသိ။ သူမ အိပျနသေော ကုတငျ လှုပျလှုပျ လှုပျလှုပျဖွဈ၍ နိုးလာခဲ့ရသညျ။ မကျြလုံးဖှငျ့၍ ကွညျ့လိုကျတော့ သူမ၏ ကုတငျနှငျ့ ကွားတှငျ ခေါကျကာလေးသာခွား၍ ထိစပျနသေော စညျသူစိုး၏ ကုတငျဆီမှ တလှုပျလှုပျ ဖွဈနကွေောငျး သိလိုကျရသညျနှငျ့ ခငျမိုးလှငျသညျ ခကျြခွငျးဆိုသလိုပငျ အိပျယာပျေါ မှထ၍ ကုတငျပျေါ မှ ဆငျးပွီး တဈဖကျရှိ စညျသူစိုး၏ ကုတငျရှိရာသို့ တိုးကပျ၍ လာကာ ကွညျ့လိုကျမိသညျ။
“ဟငျ . . ” ခငျမိုးလှငျ၏ ရငျထဲတှငျ နှေးကနဲ ဖွဈ၍သှားရတော့သညျ။ စညျသူစိုးတဈယောကျ ဝတျထားသော ပုဆိုးကို ခါးဆီသို့ ဆှဲ၍ လှနျတငျပေးထားကာ မကျြစိနှဈလုံးကို စုံမှိတျထားပွီး သူ၏ လကျတဈဖကျကတော့ ထောငျမတျ၍ နသေော သူ၏တနျကွီးကို ဆုပျကိုငျ၍ တဈခကျြခွငျး ဂှငျးတိုကျ၍ နလေသေညျ။ မကျြစိနှဈလုံးကို စုံမှိတျ၍ နသေော စညျသူစိုး၏ အမွငျအာရုံထဲတှငျတော့ ယခုတငျ သူကွညျ့ခဲ့သော အပွာကားထဲမှ ကာမစပျယှကျနကွေသော ပုံရိပျမြား၊ ညနကေ လှခေါးတှငျ တှခေဲ့ရသော ကသေီခြို၏ အလှအပမြားနှငျ့ ညနကေပငျ ရခြေိုးခနျးတှငျ တှမွေ့ငျခဲ့ရသော ခငျမိုးလှငျ၏ ဝငျးဝါ၍ လှပသော ဝတျလဈစလဈ ကိုယျလုံးမြားတို့သညျ တလှညျ့စီ မွငျယောငျ၍ နမေိသညျ။
အထူးသဖွငျ့ မာမီ ခငျမိုးလှငျ၏ တငျးရငျး၍ လုံးဝနျးနသေော ရငျသားမြား ဖွူဖှေးအိစကျကာ တလုံးတခဲကွီးဖွဈနသေော ကားစှငျ့နသေညျ့ တငျသားမြား ပွီးတော့ ဖေါငျးဖေါငျးလေး ခုံးထနသေညျ့ အမှေးပါးလေးမြားဖွငျ့ စောကျဖုတျလေးတို့သညျ သူ့ကို လှမျးခွုံစိုးမိုး၍ နတေော့လသေညျ။ ခငျမိုးလှငျသညျ စညျသူစိုး၏ အဖွဈကို တှလေို့ကျသညျနှငျ့ ခကျြခွငျးပငျ သူမ ကုတငျရှိရာ အခနျးဖကျသို့ ကူးလာခဲ့ပွီး ကုတငျဘေး စားပှဲပျေါ ရှိ စာကွညျ့စားပှဲတငျ မီးလုံးလေးကို ဖွတျကနဲ ဖှငျ့လိုကျရာက စားပှဲပျေါ ရှိ မဂ်ဂဇငျးစာအုပျကို ကွမျးပွငျပျေါ သို့ အားဖွငျ့ ပဈကာ ခလြိုကျရာ စာအုပျနှငျ့ ကွမျးပွငျတို့ ထိမိသံသညျ တိတျဆိတျသောညတှငျ ကယျြလောငျစှာ ထှကျပျေါ ၍ လာလသေညျ။ ဖွတျကနဲ လငျးလာသော အလငျးရောငျနှငျ့ တပွိုငျနကျတညျး ကွားလိုကျရသော အသံတို့ကွောငျ့ပငျ စညျသူစိုးသညျ မကျြလုံးကိုဖှငျ့ လကျကိုရုတျ၍ နားစှငျ့လိုကျမိသညျ။
ပွီးတော့ အိပျယာပျေါ မှ လူးလဲထကာ ခငျမိုးလှငျ ရှိရာဖကျသို့ကူး၍ အလာတှငျတော့ ကွားတှငျကာထားသော ခေါကျကာလေးကို ကြျော၍ အထှကျလိုကျမှာပငျ မွငျလိုကျရသော မွငျကှငျးကွောငျ့ စညျသူစိုးသညျ နောကျသို့ ဆုတျ၍ ခေါကျကာလေးအတှငျးတှငျ ဝငျရပျကာ ကိုယျတဈခွမျးထှကျ၍ ခငျမိုးလှငျ ကုတငျရှိရာသို့ ကွညျ့၍ နမေိသညျ။ ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ ကိုယျပျေါ တှငျ အဝတျအစား ဟူသမြှ ဘာမြှ မရှိတော့ပဲ သူမ၏ ကိုယျတုံးလုံးတီးလေးကို ကုတငျပျေါ တှငျ ပကျလကျလှနျကာ ဒူးနှဈဖကျကို ထောငျ၍ ပေါငျလုံးဖှေးဖှေးကွီးတှကေို အတျောပငျ ကား၍ ထားလသေညျ။ ပွီးတော့ မကျြလုံးနှဈလုံးကိုလညျး စုံမှိတျ၍ ထားသညျကို စားပှဲတငျမီးလုံးလေး၏ အလငျးရောငျဖွငျ့ ထငျထငျရှားရှား တှေ့၍ နရေလသေညျ။ ပွီးတော့ ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ ပေါငျနှဈလုံးကွားထဲသို့ လကျထညျ့၍ ခုံးမောကျနသေော သူမ၏ စောကျဖုတျကွီးကို တဈခကျြခွငျး ပှတျပေးနလေသေညျ။
စညျသူစိုးသညျ အကှယျမှ ကိုယျတဈခွမျးသာသာပငျ ထှကျ၍ လာပွီး သူ၏ ပုဆိုးကို ကှငျးလုံးခြှတျခလြိုကျရာမှ တဆငျ့ ထှကျပျေါ ၍ လာသော သူ၏ တနျကွီးကို လကျတဈဖကျက ကိုငျ၍ ခငျမိုးလှငျကို ကွညျ့ကာ ဂှငျးတိုကျပါတော့သညျ။ ခဏနတေော့ ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ မှိတျထားသော မကျြလုံးလေးမြားကို အသာလေးမှေး၍ ဖှငျ့ကာကွညျ့လိကျုရာ စညျသူစိုး၏ အဖွဈကို တှလေို့ကျရလသေညျနှငျ့ သူမ၏ ကိုယျလုံးလေးကို အိပျယာပျေါ သို့ မှောကျခလြိုကျပွီး သူမ၏ ကုတငျခွရေငျးဘကျ တဈဖကျထောငျ့နားတှငျ ရှိနသေော စညျသူစိုးဘကျ ကြောပေးကာသူမ၏ ဒူးနှဈဖကျကို ထောကျလိုကျပွီး လကျနှဈဖကျကတော့ တတောငျဆဈမြှဖွငျ့သာ ထောကျ၍ ဖငျဗူးတောငျး ထောငျပဈလိုကျလသေညျ။
ခငျမိုးလှငျ၏ နဂိုထဲကမှ လုံးတဈလှသော ဖငျသားကွီးမြားမှာ ပို၍ ကားအယျသှားရကာ ဖွူဖွူဖှေးဖှေးကွီးဖွငျ့ မကျမောစရာကွီး ဖွဈလို့နတေော့သညျ။ သူမ၏ လကျတဈဖကျက ပေါငျကွားတှငျထညျ့၍ သူမ၏ စောကျဖုတျကွီးကို ပှတျလိုကျရငျး သူမ၏ ပေါငျကွားထဲမှ တဆငျ့ စညျသူစိုးထံသို့ ကွညျ့လိုကျရာ စညျသူစိုး၏ ဂှငျးတိုကျနသေော လကျသညျ စောစောကထကျ ပို၍ သှကျလာသညျကို တှလေို့ကျရလသေညျ။ သူမသညျ ခဏမြှအကွာတှငျတော့ ဖငျဗူးတောငျးထောငျထားသော သူမ၏ ကိုယျလုံးကို အိပျယာပျေါ သို့ ပွနျလှဲခလြိုကျကာ ပကျလကျလှနျလိုကျပွနျသညျ။ ပွီးတော့ ဒူးနှဈဖကျကို ဆှဲ၍ ထောငျလိုကျပွီး ပေါငျဖှေးဖှေးကွီးနှဈလုံးကို အစှမျးကုနျ ကားလိုကျရငျး မကျြလုံးလေးမြားကို မှေးကာ စညျသူစိုးထံသို့ ကွညျ့လိုကျပွနျတော့ စညျသူစိုး၏ ကိုယျလုံးတဈခုလုံးသညျ ခေါကျကာအကှယျမှပငျ ထှကျ၍ နခေပြွေီ။ သူ၏ လကျကတော့ ပို၍ ပို၍ပငျ သှကျ၍ နတေော့သညျ။
ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ လကျတဈဖကျကို ပေါငျကွားဆီသို့ ထညျ့လိုကျပွနျသညျ။ ပွီးတော့ ဖောငျးမို့၍ နသေော သူမ၏ နှုတျခမျးသားကွီးနှဈခုကို လကျညှိုးလကျမတို့ဖွငျ့ ဖွဲဟလိုကျတော့ နီရဲလှသော အတှငျးသားမြားနှငျ့အတူ သူမ၏ စောကျစလေ့ေးမှာ ငေါကျတောကျလေး ထှကျပျေါ ၍ လာလသေညျ။ ထိုအခါတှငျမှ ခငျမိုးလှငျ၏ ကနျြနသေော လကျတဈဖကျကပါ ပေါငျကွားသို့ ရောကျလာပွီး စောကျစလေ့ေးကို လကျခြောငျးထိပျလေးဖွငျ့ ပှတျလိုကျ နှုတျခမျးသားကွီးတှကေို ပှတျလိုကျဖွငျ့ လုပျနတေော့သညျ။ မကွာမှီအခြိနျတှငျတော့ စညျသူစိုး၏ ခါးသညျ ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ ဖွဈ၍ သှားသညျကို ခငျမိုးလှငျ လှမျး၍ တှမွေ့ငျလိုကျရပါလတေော့သညျ။ မနကျမိုးလငျးတော့ ခငျမိုးလှငျ အိပျယာမှနိုးလြှငျပငျ မနကျ ၇ နာရီလောကျ ရှိနခေပြွေီ။ စညျသူစိုးကတော့ မနိုးသေးပေ။ ထုံးစံအတိုငျး ၈ နာရီလောကျမှ နိုးခလြေိမျ့မညျ။
အိပျခနျးထဲမှ ထှကျရနျ အခနျးတံခါးဝဆီသို့ လာခဲ့သော ခငျမိုးလှငျသညျ တံခါးဝသို့ မရောကျမီမှာပငျ စညျသူစိုး အိပျနရောသို့ လှမျး၍ ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ အိပျယာပျေါ တှငျ ပကျလကျကလေး မကျြနှာနုနုလေးကို တစောငျးလေးလုပျလကျြ အိပျပြျောနသေော စညျသူစိုးကို တှလေို့ကျရတော့ ခငျမိုးလှငျ၏ ရငျထဲတှငျ အေးခမျြးကာကွညျနူး၍ သှားရလသေညျ။ သူမသညျ ခဏကွာရပျ၍ ကွညျ့နပွေီးမှ အိပျခနျးပွငျသို့ ထှကျလာခဲ့သညျ။ ခငျမိုးလှငျတဈယောကျ နံနကျစာစောစောအတှကျ အားလုံးပွငျဆငျပွီးခြိနျလောကျမှ စညျသူစိုးက အိပျယာပျေါ မှ နိုး၍လာသညျ။ မကျြနှာသဈရနျ မီးဖိုဆောငျထဲသို့ ဖွတျ၍ အသှား သူမကို တဈခကျြ စူးစူးစိုကျစိုကျလေးကွညျ့၍ သှားသော စညျသူစိုးကို ခငျမိုးလှငျ သတိပွုမိလိုကျသညျ။ တဈယောကျကို တဈယောကျ လှမျး၍ စကားမပွောဖွဈ ခပျအမျးအမျးလေး ဖွဈ၍ နသေညျ။ ဒီနမေ့နကျအတှကျ ခငျမိုးလှငျသညျ စညျသူစိုးအတှကျ ခါတိုငျးလို ကျောဖီဖြျောမထား၊ နို့ကွကျဥကို ခှကျကွီးဖွငျ့ ကွကျဥ နှဈလုံးပငျ ထညျ့၍ ဖြျောပေးထားသညျ။ မနကျတိုငျးလညျး ကွကျဥကွျောကို နှဈသကျစှာဖွငျ့ စားတတျသညျဖွဈ၍ ကွကျဥ ဟပျဖရိုကျကို ၅ လုံးပငျ ကွျော၍ ပေးထားသညျ။
စညျသူစိုးတဈယောကျ စားပှဲတှငျ ဝငျ၍ ထိုငျလိုကျတော့ ခငျမိုးလှငျသညျ သူ့ကိုကြောပေးလကျြ ရခေဲသတ်ေတာထဲမှ ဟငျးခကျြစရာမြားကို ထုတျ၍ အိုးတှငျ ပွငျဆငျခြိနျပငျ ဖွဈသညျ။ သူရောကျလာမှနျးသိ၍ ပွငျဆငျပွီးသှားသညျ့တိုငျအောငျပငျ သူမသညျ လှညျ့၍ မလာသေးပဲ ခပျကွာကွာလေး အခြိနျဆှဲကာ ကြောလေးပေး၍ အကွညျ့ခံနလေိုကျသညျ။ ဒီနမေ့နကျ စညျသူစိုးတဈယောကျ နှုတျဆိတျ၍ နသေညျကို သတိထားလိုကျမိသညျ။ ခဏနမှေ ခငျမိုးလှငျသညျ စညျသူစိုးရှိရာသို့ ဖွတျကနဲ လှညျ့ကွညျလိုကျတော့ သူသညျ သူမ ထငျသညျ့အတိုငျးပငျ သူမ၏ ခါးအောကျပိုငျးကို ကွညျ့၍ နသေညျကို တှလေို့ကျရလြှငျပငျ စညျသူစိုးဖကျသို့ သူမ၏ ကိုယျလုံးလေးကို လှညျ့လိုကျပွီးသညျနှငျ့ တပွိုငျနကျတညျးမှာပငျ သူမ၏ ပေါငျနှဈလုံးကို ဟ ကနဲ လုပျလိုကျပွီး ခါးလေးကိုလညျး ဆတျကနဲ ကော့ပွလိုကျလသေညျ။ ပွီးမှ ခငျမိုးလှငျသညျ စညျသူစိုးကို တဈခကျြမြှ ပွုံးပွလိုကျပွီး သူရှိရာသို့ လှမျးလာခဲ့သညျ။
အနားသို့ရောကျသညျနှငျ့ စညျသူစိုး ထိုငျနရော ကုလားထိုငျဘေးတှငျ ဝငျ၍ သူမ၏ လကျတဈဖကျကို ထောကျပွီး ကနျြလကျတဈဖကျကို စညျသူစိုးထိုငျနသေော ကုလားထိုငျနောကျမှီကို ကိုငျလိုကျပွီး သူ၏ဖကျသို့ လှညျ့၍ ရပျလိုကျသညျ။ “သား နမေကောငျးဘူးလား” “ကောငျးပါတယျ မာမီ” “ဒီမှာ သား အားရှိအောငျလို့ မာမီ နို့ကွကျဥနဲ့ ကွကျဥတှေ လုပျထားပေးတယျ စားလိုကျဦးနျော” “ဟုတျကဲ့ မာမီ” ပွောပွီးသညျနှငျ့ ခငျမိုးလှငျသညျ ရှသေို့တိုး၍ ကိုယျကိုညှတျကာ စညျသူစိုး၏ ပါးပွငျလေးကို နမျးလိုကျသညျ။ သူမ၏ အခုအခံမပါသော ရငျအုံလုံးလုံးလေးတှကေ စညျသူစိုး၏ လကျမောငျးတဈဖကျကို ဖိကပျ၍ သှားသညျ။ စညျသူစိုးက ခကျြခွငျးပငျ လှညျ့၍ ခငျမိုးလှငျ၏ ပါးပွငျ ဖေါငျးဖေါငျးဖှေးဖှေးလေးတှကေို “ရှတျ” ကနဲ “ရှတျ” ကနဲ တဈခကျြမက နမျးပဈလိုကျလတေော့သညျ။
အခုမှပငျ ဒီနမေ့နကျ အိပျယာထတှငျ ခပျငေါငျငေါငျ ဖွဈ၍နသေော စညျသူစိုးတဈယောကျ ပွုံးပွုံးရှငျရှငျဖွဈ၍ လာပါတော့သညျ။ အလုပျကိစ်စရှိ၍ စညျသူစိုးတဈယောကျ စကားပွောသငျတနျးကြောငျးမှ ပွနျမလာမီလေးမှာပငျ အပွငျသုိ့ ထှကျ၍သှားသော ခငျမိုးလှငျတဈယောကျ ည ၈ နာရီ ထိုးကာနီးလောကျမှ အိမျသို့ ပွနျရောကျလာခဲ့သညျ။ သားအမိနှဈယောကျ သော့တဈခြောငျးစီ ကိုငျထားကွသညျဖွဈ၍ တံခါးကို ဖှငျ့၍ ဝငျလိုကျစဉျမှာပငျ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျထိုငျ၍ ဗီစီဒီ ကွညျ့နသေော စညျသူစိုးသညျ ဖွတျကနဲပငျ ရီမုတျဖွငျ့ ဗီစီဒီကို ပိတျလိုကျသညျကို တှလေို့ကျရသညျ။ “ဟော မာမီ ပွနျလာပွီ” ပွောလိုကျရငျးကပငျ တံခါးကို ပွနျပိတျပွီး သူ့ကို ပွုံး၍ ရပျကွညျ့နသေော ခငျမိုးလှငျထံသို့ စညျသူစိုးသညျ ထလာပွီး ခငျမိုးလှငျ၏ ကိုယျလုံးလေးကို အတငျးပငျ ဆှဲ၍ ဖကျလိုကျသညျ။
သူ၏ ပုဆိုးအောကျမှ မာတောငျနသေော ဟာကွီးက ခငျမိုးလှငျ၏ ဆီးခုံကိုဒိနျးကနဲပငျ ဝငျ၍ ဆောငျ့လိုကျသညျ။ ခငျမိုးလှငျ၏ မကျြလုံးလေးမှာ မှေးကနဲ ကြ၍ သှားသညျ။ ပွီးတော့ ခကျြခွငျး ပွနျ၍ ပှငျ့လာသညျ။ စညျသူစိုးကတော့ သူမ၏ ပါးပွငျလေးတှနှေငျ့ မကျြနှာလေး တဈခုလုံးကို အငမျးမရ နမျးနတေော့သညျ။ ခငျမိုးလှငျကလညျး သူ့ခါးကို ပွနျ၍ ခပျတငျးတငျးလေး ဖကျထားပေးလိုကျသညျ။ ခဏနပွေီး နမျးလို့ အားရသှားတော့မှ ခငျမိုးလှငျ၏ မကျြနှာဆီမှ သူ့မကျြနှာကို ခှာလိုကျသညျ။ သူမ၏ ကိုယျလုံးလေးကိုတော့ မလှတျမတမျး ဖကျထားမွဲပငျ။ “သား ထမငျးစားပွီးပွီလား . . “ဟုတျကဲ့ . . ” “ဒါဆို မာမီ သှားစားလိုကျဦးမယျနျော ဒီည သိပျညဥျ့နကျမခံနဲ့နျော မနကေ့လဲ ညဥျ့နကျတယျ မဟုတျလား” “ဟုတျကဲ့” စညျသူစိုး၏ လကျတှကေ ခငျမိုးလှငျ၏ ကိုယျလုံးလေးပျေါ မှ ဖယျခှာသှားပမေယျ့လညျး ခငျမိုးလှငျ၏ လကျတှကေတော့ စညျသူစိုး၏ ကိုယျပျေါ မှ မခှာသေး ဖကျထားဆဲပငျ။
ထို့ကွောငျ့ပငျ စညျသူစိုးက မကျြနှာလေးကို အသာမော့မော့လေး လုပျ၍ ခငျမိုးလှငျ၏ မကျြနှာကို အကွညျ့လိုကျတှငျတော့ ခငျမိုးလှငျ၏ မကျြနှာက ရုတျတရကျ တိုးကပျလာရာမှ သူမ၏ နှုတျခမျးလေးမြားက စညျသူစိုး၏ နှုတျခမျးလေးတှပေျေါ သို့ ဖွတျကနဲ ကရြောကျလာရာမှ ခပျမွှငျးမွှငျးလေး စုပျနမျးလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ခဏအတှငျးမှာပငျ ပွနျ၍ခှာလိုကျပွီး သူ့ကိုယျလုံးလေးပျေါ မှ လကျမြားကိုပါ ဖယျခှာကာ ခငျမိုးလှငျသညျ လှညျ့၍ ထှကျလာခဲ့ပါတော့သညျ။ စညျသူစိုးကတော့ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ ပွနျ၍ ထိုငျကာ ဗီစီဒီကို ဆကျကွညျ့နသေညျ။ ခငျမိုးလှငျ အပွငျသို့ မထှကျမီ စညျသူစိုးတဈယောကျ ပွနျ၍ မရောကျခငျကပငျ သူမသညျ မနကေ့ ဗီစီဒီ ၂ခပျြကိုသိမျး၍ နောကျထပျ ဗီစီဒီအသဈ ၂ ခပျြကို လဲ၍ ထားပေးခဲ့လသေညျ။ ခငျမိုးလှငျတဈယောကျ အဝတျအစားလဲပွီး ထမငျးစားခနျးထဲသို့ လာ၍ ထမငျးစားနစေဉျမှာတော့ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ ဗီစီဒီထိုငျ၍ ကွညျ့နသေော စညျသူစိုးသညျ ခငျမိုးလှငျရှိရာသို့ ဝငျလာကာ သုံးလေးကွီမျထကျမနညျး သူမ အပါးသို့ ရောကျ၍ လာပွီး အကွောငျးမရှိ အကွောငျးရှာကာ ရဈသီ ရဈသီ လုပျ၍ နလေသေညျ။
ဒါကို သိပမေဲ့လညျး ခငျမိုးလှငျက မသိခငျြယောငျဆောငျ၍ နခေဲ့သညျ။ ကောငျလေးတဈယောကျ သူမကို မကျမောတပျမကျ၍ နသေညျကိုတော့ သူမ၏ ရငျထဲတှငျ ကွညျနူးမဆုံး ဖွဈ၍ နရေပါတော့သညျ။ ထုံးစံအတိုငျး အိပျခနျးထဲတှငျ စာဖတျနသေော ခငျမိုးလှငျသညျ ည ၁၀ နာရီထိုးကာနီးမှပငျ ညအိပျမီးလုံးလေးကို ဖှငျ့၍ မီးမြားမှိတျလိုကျပွီး အိပျယာပျေါ သို့တကျ၍ လှဲနလေိုကျတော့သညျ။ ဒီညတှငျတော့ ညဝတျအင်ျကြီကို မဝတျတော့ပဲ ရငျစေ့ လကျပွတျအင်ျကြီလေးကို တဈထပျတညျး ဝတျပွီး ထမီလေးကိုပငျ သူမသညျ ဝတျ၍ ထားလသေညျ။ ပွီးတော့ အိပျယာပျေါ ရောကျတော့ သူမသညျ စောငျကို မွှငျ့၍ တကိုယျလုံးကို ခွုံ၍ ထားလိုကျသေးသညျ။ ၁၅ မိနဈ သာသာလောကျသာ ကွာလိမျ့မညျထငျသညျ။ စညျသူစိုးတဈယောကျ အခနျးထဲသို့ ဝငျ၍ လာခဲ့သညျ။ သူ ဝငျလာမှနျးသိ၍ မကျြလုံးလေးကိုမှေးကာ ကွညျ့လိုကျမိတော့ သူသညျ သူမ၏ ကုတငျခွရေငျးနားတှငျ ရပျကာ သူမကို မမှိတျမသုနျ ကွညျ့၍ နနေသေညျ။ စောငျခွုံ၍ လှဲနသေော သူမကို တခဏမြှ ကွညျ့ပွီး သူသညျ သကျပွငျးလေး တဈခကျြခကြာလှညျ့၍ ထှကျသှားလတေော့သညျ
။ မကွာမီမှာပငျ စညျသူစိုးတဈယောကျ သူ၏ အိပျယာပျေါ သို့ လှဲခလြိုကျသညျကို သိလိုကျရသညျ။ ပွီးတော့ လူးလူး လှိမျ့လှိမျ့လေးဖွဈရာမှ စညျသူစိုးသညျ ငွိမျ၍ကသြှားလသေညျ။ ထိုအခါတှငျမှ ခငျမိုးလှငျသညျ စောငျကိုခှာပွီး အိပျယာပျေါ မှ လူးလှိမျ့၍ ညငျသာစှာထကာ ကုတငျပျေါ မှ ဆငျးပွီး စညျသူစိုး၏ ကုတငျရှိရာသို့ လာခဲ့သညျ။ သူမ တှေးထငျထားသညျ့အတိုငျးပငျ စညျသူစိုးသညျ ပကျလကျလှနျလြှကျ မကျြလုံးနှဈလုံးကို စုံမှိတျကာ ပုဆိုးကို ဖွညျလြော့၍ ခထြားပွီး ထောငျမတျနသေော တနျကွီးကို သူ၏ လကျတဈဖကျဖွငျ့ ဆုပျကာ ဆုပျကာ ဖှဖှလေး ပှတျ၍ ပေးနလေသေညျ။ ခငျမိုးလှငျ၏ လကျတဈဖကျက တနျကွီးအပျေါ မှ စညျသူစိုး၏ လကျပျေါ သို့အုပျ၍ ကိုငျလိုကျလသေညျ။
ပွီးတော့ သူ့လကျကို ဆှဲ၍ ဖယျလိုကျသညျ။ “ဟငျ . . မာမီ . . ဟို . . သား . . ဟို . . . ” “သား မကျြလုံးလေးမှိတျပွီး ငွိမျငွိမျလေး နလေိုကျ သား ဘာဖွဈနတေယျဆိုတာကို မာမီသိတယျ” ဒီတော့မှ အထိတျတလနျ့လေး ဖွဈ၍ သှားသော စညျသူစိုးမှာ ငွိမျ၍ ကသြှားပွီး သူ၏ မကျြလုံးမြားကို ပွနျ၍ မှိတျပဈလိုကျလသေညျ။ ထိုအခါတှငျတော့ ခငျမိုးလှငျသညျ စညျသူစိုး၏ ဘေး ကုတငျပျေါ သို့ ဝငျ၍ ထိုငျလိုကျရာ စညျသူစိုးက တဈဖကျသို့ တိုး၍ ပေးလိုကျသညျ။
ထိုငျပွီးသညျနှငျ့ သူမသညျ စညျသူစိုး၏ ပုဆိုးကို ဆှဲ၍ ခြှတျလိုကျသညျ။ နောကျသူမ၏ လကျဖဝါးနုနုလေးဖွငျ့ ကွှကျသားမွောငျးကွီးမြား ထ၍ နသေော မာကွောတောငျ့တငျးလှသညျ့ သူ၏ ပေါငျတံကွီးတှကေို စုနျကာ ဆနျကာ ပှတျ၍ ပေးလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ လုံးတဈ၍နသေော စညျသူစိုး၏ ဂှေးအုကွီးကို သူမ၏ လကျဖဝါးလေးဖွငျ့ တဈခကျြနှဈခကျြလောကျ ဆုပျ၍ ဆုပျ၍ ပေးလိုကျပွီးတော့မှ သူ၏ ပေါငျခွံနှဈဖကျကို လကျဖဝါး နုနုလေးမြားဖွငျ့ လြှောတိုကျကာ ပှတျ၍ ပေးလိုကျပွနျပါသညျ။ သညျနောကျတှငျတော့ ခငျမိုးလှငျ၏ လကျလေးကစညျသူစိုး၏ တနျကွီးကို ဖှဖှလေး ကိုငျလိုကျရာက ညငျညငျသာသာလေး ပှတျ၍ ပေးနသေညျ။ ပွီးတော့ ဖေါငျးကားနသေော တနျကွီး၏ ဒဈကွီးအောကျဖကျသို့ သူမ၏ လကျမလေးဖွငျ့ ဖိကပျကာ ပှတျပေးသညျ။ တခဏအတှငျးမှာပငျ စညျသူစိုး၏ တနျကွီးမှာ ခငျမိုးလှငျ၏ လကျအတှငျးမှာပငျ အဆမတနျ ကွီးထှား၍ လာရလသေညျ။
ပွီတော့ သူ၏ တနျကွီးသညျ ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ ဖွဈ၍ လာရတော့သညျ။ သညျတော့မှ ခငျမိုးလှငျ၏ လကျကလေးက စညျသူစိုး၏ တနျကွီးကို ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျပငျ ကိုငျ၍ တဈခကျြခွငျး ဂှငျးတိုကျပေးပါလတေော့သညျ။ ထိုသို့လုပျပေးရငျးကပငျ သူ၏ ဒဈကွီးအောကျဖကျသို့ လကျမဖွငျ့ မကွာခဏ ဖိ၍ပှတျကာ ပေးနသေလို ကနျြသော သူမ၏ လကျတဈဖကျကလညျး စညျသူစိုး၏ ပေါငျလုံးကွီးမြား၊ ပေါငျခွံမြား အမှေးနုနုလေးမြား ပေါကျနသေညျ့ ဆီးခုံမြားပျေါ သို့လညျး ဖှဖှလေးတမြိုး ဖိ၍ တဖုံ ပှတျပေးနသေညျ။ ဒါ့အပွငျ စညျသူစိုး၏ ဂေှး ဥကွီးကိုလညျး သူမ၏ လကျဖဝါးထဲတှငျထညျ့၍ မကွာခဏ လှိမျ့၍ လှိမျ့၍ ပေးကာ ခပျဖှဖှလေးလညျး ဆုပျနယျ၍ ပေးနလေသေညျ။ အတနျငယျမြှအကွာတှငျတော့ စညျသူစိုး၏ မို့မောကျနသေော ရငျအုပျကယျြကွီးသညျ နိမျ့ခြီ မွငျ့ခြီဖွဈ၍ လာရာမှ သူ၏ ပေါငျတနျကွီးမြားသညျလညျး လှုပျလှုပျရှရှဖွဈ၍ လာလတေော့သညျ။
ခငျမိုးလှငျသညျ လကျတဈဖကျက စညျသူစိုး၏ တနျကွီးကို ကိုငျ၍ ဂှငျးတိုကျပေးနလြှေကျကပငျ သူ၏ ကိုယျလုံးကွီးဘေးမှနေ၍ သူမ၏ ကိုယျလုံးအပျေါ ပိုငျးကို စညျသူစိုး၏ ရငျအုပျကယျြကွီးပျေါ သို့ မှောကျ၍ ခလြိုကျသညျ။ “သား မာမီကို ဖကျထားလေ” “အငျး . . . ” စညျသူစိုး၏ လကျနှဈဖကျက ခငျမိုးလှငျ၏ ကိုယျလုံးလေးကို ဖကျတှယျ၍ လာရငျး သူ၏ မကျြလုံးတှကေ ခငျမိုးလှငျကို ဖှငျ့၍ ကွညျ့အလာတှငျတော့ ခငျမိုးလှငျ၏ ရီဝေ၍ နသေော မကျြလုံးမြားက သူ့မကျြလုံးမြားကို စူးစိုကျကာ ရငျဆိုငျ၍ ကွညျ့လာသညျ။ ခငျမိုးလှငျ၏ လကျတဈဖကျက စညျသူစိုး၏ လညျပငျးအောကျသို့ ထိုးသှငျးကာ ဖကျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ လကျထဲမှ တနျကွီးကို ခပျသှကျသှကျ ဂှငျးတိုကျပေးရငျး ခငျမိုးလှငျသညျ စညျသူစိုး၏ နှုတျခမျးတှကေို ခပျမွှငျးမွှငျးလေး စုပျပေးလိုကျသညျ။
ပွီးတော့ စညျသူစိုး၏ မကျြလုံးမြားကို စိုကျ၍ ကွညျ့ပေးပွနျသညျ။ ထိုသို့ပငျ ခငျမိုးလှငျသညျ တလှညျ့စီနမျးကာ ကွညျ့ကာ လုပျပေးနစေဉျမှာပငျ သူမကို ဖကျ၍ ထားသော စညျသူစိုး၏ လကျမြားက အတငျးကွုံး၍ ဖကျလိုကျသောအခါတှငျတော့ ခငျမိုးလှငျက စညျသူစိုး၏ နှုတျခမျးတှကေို အတငျးပငျ ငုံ့၍ စုပျပေးလိုကျရာက သူမ၏ လကျထဲမှ စညျသူစိုး၏ ကွီးကိုလညျး တအားပငျ ညှဈ၍ ဆုပျလိုကျပွီး ပွငျးထနျစှာဖွငျ့ ဂှငျးတိုကျပေးလိုကျတော့ရာ တခဏအတှငျးမှာပငျ စညျသူစိုး၏ ကိုယျလုံးကွီးသညျ ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ တုနျ၍ တကျသှားရာ တနျကွီးကို ဆုပျ၍ ကိုငျထားသော ခငျမိုးလှငျ၏ လကျလေးပျေါ တှငျ နှေးကနဲ နှေးကနဲ ဖွဈ၍ သှားရစဉျမှာပငျ ခငျမိုးလှငျ၏ ရငျထဲတှငျ ဟာ၍ သှားရလတေော့သညျ။
“မာမီ . . ” “အို . . . . ” ခငျမိုးလှငျ၏ ကိုယျလုံးလေးသညျ လနျ့ပွီး တုနျ၍ပငျ သှားရသညျ။ သနပျခါးလိမျးအပွီး မှနျတငျခုံရှကေမှထကာ ဘီရိုထဲတှငျ အင်ျကြီရှေးနခေိုကျ ဘယျအခြိနျက ရောကျလာမှနျးမသိသော စညျသူစိုးက သူမကို နောကျမှနေ၍ ရုတျတရကျ ဖကျလိုကျသညျဖွဈ၍ ဗွုံးကနဲဆိုတော့ လနျ့၍ သှားရသညျ ဖွဈသညျ။ ထမီရငျလြှားလေးဖွငျ့ ခငျမိုးလှငျ၏ ကိုယျလုံးလေးကို နောကျဖကျမှ သိုငျးဖကျကာထားရငျး စညျသူစိုး၏ မကျြလုံးတှကေ သူမ၏ ပုခုံးပျေါ မှ ကြျောကာ ရှသေို့ ဖွူဖှေး၍ ဖောငျးတငျးနသေော နို့အုံကွီးတှကေို တပျမကျစှာဖွငျ့ ကွညျ့၍ နသေညျ။ ထိုသို့ ကွညျ့နရေငျးမှပငျ စညျသူစိုးသညျ သနပျခါး မခွောကျတခွောကျ စိုဖနျ့ဖနျ့လေး ဖွဈ၍ နသေော ခငျမိုးလှငျ၏ ပါးပွငျလေးကို ရှတျကနဲ နမျးလိုကျသညျ။ “မာမီ သားငယျငယျတုနျးက နို့မစို့ခဲ့ရပဲ နို့ဘူးတိုကျခဲ့တာကို ဖဖေေ ရှိတုနျးကပွောတယျ အဲဒါ ဟုတျလားဟငျ” “အငျး . . ” “အငျး . . ” လိုကျရသော ခငျမိုးလှငျ၏ ရငျထဲတှငျ ဒိတျကနဲ ဖွဈ၍ သှားရသညျ။
“အဲဒါ မာမီရာ ဘယျလိုနလေဲ စို့ကွညျ့ခငျြလို့” “ဟယျ ဒီကောငျလေး မကွီးမငယျနဲ့ ဘာမှနျးလဲ မသိဘူး” ပွောလိုကျရသော သူမ၏ ရငျသားတှပေျေါ သို့ ရောကျ၍ လာသော စညျသူစိုး၏ လကျလေးကို အထိတျတလနျ့ဖွငျ့ ဖယျခလြိုကျမိသညျ။ ပွီးတော့မှ ခငျမိုးလှငျသညျ သကျပွငျးလေး တဈခကျြခလြိုကျရငျးက “ကဲ လာ . . သား . . မာမီ ပွောပွမယျ” ဟုဆိုကာ စညျသူစိုးကို အနီးရှိ မှနျတငျခုံတှငျ ဝငျ၍ ထိုငျစလေိုကျပွီး သူမ၏ လကျလေးနှဈဖကျက စညျသူစိုး၏ ပုခုံးတဈဖကျတဈခကျြပျေါ တှငျ တငျကာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ထိုငျလိုကျသညျ။ “သား တကယျ နို့စို့ခငျြလို့လား” “အငျး . . . ” “ကဲ ဒါဆိုရငျ စို့ရမယျ . . . ဒါပမေယျ့ မာမီ့ ပွောစကားနားထောငျရမယျ” “ပွောလေ မာမီ” ” “သား ဒီနကေ့စပွီး ၃ ရကျတိတိ မနကျတဈခါ ညနတေဈခါ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရမယျ၊
ညဘကျကို ဗီစီဒီ မကွညျ့ရဘူး၊ ည ၉ နာရီထိုးတာနဲ့ အိပျရမယျ . . ကဲ ဘယျနှယျ့လဲ အဲဒါကို သားလိုကျနာနိုငျမယျ ဆိုရငျ အဲဒီ့ ၃ ရကျပွီးရငျ သားလိုခငျြတာပွော ဘာမဆို အကုနျဖွဈစရေမယျ . . ခုလညျး နို့စို့ရမယျ သားလိုကျနာနိုငျပါ့မလား” “ရတယျ မာမီ . . သား လိုကျနာပါ့မယျ” “သခြောရဲ့လား သားရဲ့” “သခြောပါတယျ မာမီရယျ” “ကဲ ဒါဆို ထ . . လာ” ဟု ပွောပွီး စညျသူစိုး၏ လကျတဈဖကျကို ဆှဲကာ ကုတငျကွီးဆီသို့ ဆှဲ၍ ချေါ ခဲ့သညျ။ ကုတငျကွီးဆီသို့ ရောကျတော့ ခငျမိုးလှငျက ကုတငျပျေါ တကျကာ ပကျလကျလေး လှနျပေးလိုကျသညျ။
“လာ . . လေ” စညျသူစိုး ကုတငျပျေါ သို့ လှမျး၍ တကျလိုကျပွီး ခငျမိုးလှငျ၏ ဘေးတှငျ ဝငျ၍ ထိုငျလိုကျတော့ရာ ခငျမိုးလှငျက စညျသူစိုး၏ မကျြနှာကို ပွုံး၍ ကွညျ့လိုကျရငျး သူမ၏ ရငျဘတျဆီမှ ရငျလြှားထားသော ထမီလေးကို အောကျသို့ လြော့၍ ခလြိုကျတော့ရာ စညျသူစိုး၏ မကျြလုံးမြားက အရောငျတလကျလကျ တောကျပ၍ လာတော့သညျ။ ခငျမိုးလှငျ၏ နို့လေးနှဈလုံးမှာ ပေါကျစီလုံးအရှယျ ပမာဏမြှရှိပွီး ဝငျးမတျှ၍ နုညကျကာ တငျး၍ နသေညျ့ နို့သီးခေါငျးလေးမြားမှာတော့ ထောငျတကျ၍ နသေညျ။ “ကဲ စို့လေ . . ” ခငျမိုးလှငျ၏ အသံလေးမှာ တုနျယငျ၍ နသေညျ။ သူမ၏ စကားအဆုံးမှာပငျ စညျသူစိုးက မှောကျ၍ ခလြိုကျရာက သူမ၏ ကိုယျလုံးလေးကို ဖကျလိုကျရငျး သူမ၏ နို့လေးတဈလုံးကို ဖိကပျ၍ စို့လိုကျလတေော့သညျ။ သူမ၏ လကျနှဈဖကျကလညျး သူ့ကို ဆီးကွို၍ ပှဖေ့ကျလိုကျသညျ။
ခငျမိုးလှငျက သူမ၏ လကျတဈဖကျဖွငျ့ စညျသူစိုး၏ လကျတဈဖကျကို လှမျး၍ ဆှဲကာ ကနျြသော နို့တဈလုံးပျေါ သို့ စညျသူစိုး၏ လကျကိုတငျ၍ ပေးလိုကျရာတှငျတော့ စညျသူစိုးသညျ သူ၏ လကျတို့ဖွငျ့ ခငျမိုးလှငျ၏ နို့အုံလေးကို ဆုပျနယျဖဈြညှဈ၍ ပေးလာလသေညျ။ ခငျမိုးလှငျ၏ မကျြတောငျကော့ကွီးမြားသညျ စငျး၍ ကသြှားလသေညျ။ စညျသူစိုးကလညျး သူမ၏ နို့အုံတှကေို အားပါးတရပငျစို့၍ နလေတေော့သညျ။ “နို့ . . နို့သီးခေါငျးကို လြှာနဲ့ယကျ . . ယကျပေးလေ . . ဟုတျ . . ဟုတျပွီ . . ဒီဖကျလကျကလညျး နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို ခြေ . . ခပြေေး . . အငျး . . ဟုတျ . . ဟုတျပီ” ခငျမိုးလှငျတဈယောကျ မောဟိုကျကာ နရေပါသညျ။ သူမ၏ အသံလေးတှပေငျ တုနျယငျ၍ နကွေသညျ။ စညျသူစိုးက ခငျမိုးလှငျ ပွောသညျ့အတိုငျးပငျ လုပျပေးသညျ့အပွငျ နို့နှဈလုံးကိုလညျး တဈလှညျ့စီ စို့ကာ တဈလှညျစီလညျး လကျဖွငျ့ကိုငျကာ ဆုပျနယျပေးလာတော့သညျ။ ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ နို့ကွီးတှကေို စညျသူစိုးဆီသို့ အတငျးပငျ ဖိကပျ၍ ပေးနသေညျ။
သူမ၏ ဒူးလေးနှဈဖကျသညျပငျ ထောငျ၍ လာပွီး ပေါငျတံကွီးတှမှော အတျောပငျ ကားသှားလိုကျ စကေ့ပျသှားလိုကျနှငျ့ ဖွဈနကော ကွိတျမနိုငျ ခဲမရ ဖွဈ၍နသေော ခငျမိုးလှငျခမြာ အတျောပငျ သရုပျပကျြ၍ နရေတော့သညျ။ ၁၀ မိနဈခနျ့ပငျ ကွာမညျဟု ထငျရသညျ။ ထိုအခါတှငျမှ နို့စို့၍ အားရသှားသော စညျသူစိုးသညျ သူ၏ မကျြနှာကို သူမ၏ ရငျဘတျပျေါမှ ခှာလိုကျသညျ။ ဗွုံးကနဲ ခငျမိုးလှငျမှာ မကျြလုံးနှဈလုံးကို မဖှငျ့နိုငျသေး၊ အသကျကို မှနျအောငျ ရှုနပွေီးမှ သူမ၏ မကျြလုံးလေးမြားကို ဖှငျ့၍ ကွညျ့လိုကျသညျ။ ပွီးတော့မှ သူမ၏ ဘေးတှငျ တုနျတုနျယငျယငျလေးဖွငျ့ ထိုငျနသေော စညျသူစိုး၏ လကျဖြားလေးတဈဖကျကို သူမ၏ လကျတဈဖကျဖွငျ့ ဆှဲယူ၍ ကိုငျလိုကျရာက ခငျမိုးလှငျသညျ စညျသူစိုး၏ လကျဖြားလေးကို သူမ၏ ရငျဘတျပျေါ တှငျ ဖိ၍ ကပျထားလိုကျပွီး သူမ၏ မကျြလုံးလေးနှဈလုံးမှာလညျး ပွနျ၍ မှိတျသှားလသေညျ။
ခဏကွာမှ ခငျမိုးလှငျ၏ မကျြလုံးလေးမြားမှာ ပွနျ၍ ပှငျ့လာခဲ့ပွီး စညျသူစိုး၏ လကျကလေးမြားကို လှတျ၍ ပေးလိုကျလသေညျ။ “သား . . စောစောက မာမီ ပွောထားတာတှကေို လိုကျနာရမယျနျော အဲဒီ ၃ ရကျပွီးရငျ သား ဖွဈခငျြတာကိုပွော အားလုံး ဖွဈရစမေယျ သိလား” “ဟုတျကဲ့ မာမီ” “ကဲ သားလညျး သငျတနျးခြိနျ နီးနပွေီ သှားတော့နျော . . ” သူမကို ခေါငျးညိမျ့ပွပွီး အိပျခနျးထဲမှ ထှကျသှားသော စညျသူစိုး၏ ကြောပွငျကွီးကို မကျြစိတဆုံး ငေးကွညျ့ရငျး သူမ၏ မွငျကှငျးထဲမှ စညျသူစိုးတဈယောကျ ပြောကျကှယျသှားတော့မှ ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ လကျကလေးတဈဖကျကို ထမီထဲသို့ လကျလြှိုသှငျးကာ ပေါငျရငျးခှဆုံသို စမျး၍ ကွညျ့လိုကျသညျ။ စောကျရညျလေးမြား ရှဲရှဲနဈနဈလေး ဖွဈ၍နသေညျကို စမျးလိုကျမိတော့ ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ နှုတျခမျးလေးကို တှနျ့ကာ အံတဈခကျြ ကွိတျလိုကျမိပါတော့သညျ။
စညျသူစိုးတဈယောကျ ခငျမိုးလှငျ၏ ရငျခှငျထဲသို့ ရောကျတော့ ၃ နှဈသားပငျ ရှိသေးသညျ။ တကယျတော့ စညျသူစိုးသညျ သူမ၏ ခငျပှနျး ဦးမောငျမောငျစိုးဖကျမှ ပါလာသော လငျပါသားပငျဖွဈသညျ။ စညျသူစိုးအခါလညျ အရှယျမှာပငျ သူ၏ မိခငျ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီး စညျသူစိုး ၃ နှဈသား အရှယျတှငျ ဦးမောငျမောငျစိုးနှငျ့ ခငျမိုးလှငျတို့ ညားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ နဂိုကပငျ ကလေးခဈြတတျသော ခငျမိုးလှငျက စညျသူစိုးကို ခဈြရှာပါသညျ။ ဒီကွားထဲ ဖခငျဖွဈသူ ဦးမောငျမောငျစိုးကပါ ကှယျလှနျသှားတော့ စညျသူစိုးအပျေါတှငျ ပို၍ပငျ ဂရုဏာသကျခဲ့ရသညျ။ လှဆဲ၊ ခြောဆဲ၊ နုပြိုဆဲ ဖွဈသော ခငျမိုးလှငျသညျ ယောကျြားကှယျလှနျပွီးခြိနျမှ ယခုထိ ၅ နှဈတာကာလတှကေို သူမ၏ သှေးသားမြားအား အနိုငျနိုငျ ထိနျးခြုပျ၍ ခကျခဲစှာ ကြျောဖွတျခဲ့ရသညျ။ ထိုတဈနကေ့ စညျသူစိုးနှငျ့ ကသေီခြိုတို့ တဈယောကျကို တဈယောကျ စိတျကစားနတောကို တှမွေ့ငျလိုကျရာမှစ၍မိနျးမခငျြးဖွဈသော ကသေီခြိုကို မနာလိုဖွဈမိသညျ။ စညျသူစိုးကို သဝနျကွောငျလိုကျမိစဉျမှစ၍ သူမ၏ ငုတျလြှိုး၍ နခေဲ့ရသော ကာမသှေးမြားသညျ သှေးတိုးစမျးလာခဲ့သညျ။ တကယျဆို စညျသူစိုးကို သူမဆိုငျသညျ။ ပိုငျခွငျးပိုငျလြှငျ သူမကသာ ပိုငျရမညျဟု ခငျမိုးလှငျ တှေးမိသညျ။
ဒါကွောငျ့ပငျ အရိုငျးသကျသကျ စညျသူစိုးကို ကာမနှငျ့ ပတျသကျသညျတို့ မွငျဘူးအောငျ ဗီစီဒီတှကေို တဈဖကျလှညျ့ဖွငျ့ ကွညျ့စသေညျ။ ပွီးတော့ သူမ၏ ကိုယျခနာကို တပျမကျလာစရေနျနှငျ့ သူမကို တှယျတာလာစရေနျ ပွုလုပျခဲ့သညျ။ တဖနျ သူမအပျေါ တှငျ စညျသူစိုးတဈယောကျ ရဲတငျးလာအောငျ သူမကပငျစ၍ ရဲရဲတငျးတငျး နပွေလိုကျသညျ။ အခုဆိုရငျ သူမပွောခဲ့သညျ့ ၃ ရကျ ပွီးဆုံး၍ ၄ ရကျမွောကျညသို့ပငျ ရောကျခဲ့ပွီး ညနကေ စညျသူစိုးကို လကေ့ငျြ့ခနျး မကစားစပေဲ ဗီစီဒီ ၂ ခပျြကို ခပျပွောငျပွောငျပငျ ထုတျ၍ ကွညျ့စခေဲ့သညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ သုံးရကျအတှငျးကဆိုရငျ စညျသူစိုးတဈယောကျ သူမကို အဝေးမှ ကွညျ့၍ အရိပျတကွညျ့ကွညျ့ဖွငျ့နပေုံကို ပွနျ၍ မွငျယောငျရငျး ခငျမိုးလှငျ ပွုံးလိုကျမိသေးသညျ။
သူ ဗီစီဒီကွညျ့နခြေိနျကမြှ ခငျမိုးလှငျက ရထေခြိုးပွီး ယခု အလှပွငျနသေညျ။ ပွငျတာမှ အလှုပှဲ ဧညျ့ခံပှဲ ပှဲနေ ပှဲထိုငျတှကေို သှားမညျ့သကဲ့သို့ပငျ ခယျြမှုနျး၍ ပွငျဆငျနလေသေညျ။ ပွီးသညျနှငျ့ သူမ၏ ကိုယျပျေါ သို့ ညဝတျအင်ျကြီပါးပါးလေး တဈထညျကို တဈထပျတညျးဝတျပွီး ကိုယျလုံးပျေါ မှနျထဲတှငျ လှညျ့ပတျကွညျ့လိုကျပွီးတော့မှ ခငျမိုးလှငျသညျ ဆယျကြျောသကျလေးပမာ ဖတျြလတျတကျကွှစှာဖွငျ့ စညျသူစိုးရှိရာသို့ ထှကျ၍ လာခဲ့လသေညျ။ ဧညျ့ခနျးထဲသို့ လှမျးဝငျလိုကျသညျနှငျ့သူမကို လှမျး၍ ကွညျ့လိုကျသော စညျသူစိုးမှာ ဗီစီဒီကို ပိတျရနျပငျ မေ့၍ သှားရတော့သညျ။ အနားသို့ရောကျသညျနှငျ့ သူမသညျ နှဈနှဈကာကာလေး ပွုံးပွလိုကျပွီး စညျသူစိုး၏ နံဘေးတှငျ ဝငျ၍ ထိုငျခလြိုကျကာ စညျသူစိုး၏ လကျတဈဖကျကို ဆှဲ၍ သူမ၏ ခါးလေးကို ဖကျစလေိုကျသညျ။ ပွီးတော့မှ သူမသညျ စညျသူစိုး၏ ရငျခှငျထဲသို့ တိုးဝငျလိုကျရငျး စညျသူစိုး၏ မကျြနှာကို တမိနျ့တမော မော့၍ ကွညျ့နသေညျ။ စညျသူစိုးကလညျး သူမ၏ မကျြနှာလေးကို ငုံ့၍ ကွညျ့နသေညျ။
ပွီးတော့မှ စညျသူစိုး၏ မကျြနှာက ငုံ့၍ ကလြာပွီး နီစှေးရှမျးစိုနသေော သူမ၏ နှုတျခမျးသားလေးမြားကို ညငျညငျသာသာပငျ စုပျယူ၍ နမျးလိုကျလတေော့ရာ ခငျမိုးလှငျကလညျး သူ၏ ကြောပွငျကွီးကို ဖကျတှယျ၍ သူ့နှုတျခမျးမြားကို ပွနျ၍ စုပျနမျးပေးလိုကျသညျ။ အတနျကွာအောငျ အနမျးရယောဉျကွောတှငျ မြောနခေဲ့ပွီးတော့မှ သူတို့၏ မကျြနှာနှဈခုတို့သညျ တဈဦးကို တဈဦး တပျမကျစှာ ကွညျ့ရငျး ခဲခှာသှားလေ တော့သညျ။ “အိပျခနျးထဲ သှားကွမယျကှာ . . ” တိုးလှနျးသော ခငျမိုးလှငျ၏ အသံလေးမှာ တုနျခါ၍နသေညျ။ ပွောပွီးသှားပမေယျ့ ခငျမိုးလှငျသညျ စညျသူစိုး၏ ရငျခှငျထဲမှ မထပေ။ ပွီးမှ သူမသညျ စညျသူစိုး၏ မကျြနှာကို မြှျောလငျ့တကွီးကွညျ့ရငျး “ပှခေ့ျေါ ပါလားဟငျ” ဟု ပွောလိုကျလသေညျ။
အခနျးထဲရောကျသညျနှငျ့ ကုတငျပျေါ သို့ သူမ၏ ကိုယျလုံးလေးကို တငျပေးလိုကျစဉျမှာပငျ ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ ညဝတျအင်ျကြီလေးကို ခြှတျ၍ ပေးလိုကျသညျတှငျ စညျသူစိုးသညျ သူမ၏ နို့နှဈလုံးကို အငမျးမရ ကုနျး၍ စို့ပါလတေော့သညျ။ ထိုစဉျမှာပငျ ခငျမိုးလှငျ၏ လကျက စညျသူစိုး၏ ပုဆိုးနှငျ့ အင်ျကြီတှကေို ခြှတျ၍ ပေးအပွီးတှငျ နို့တှကေို ကုနျး၍ တပွနျစီစို့နသေော စညျသူစိုး၏ လကျတဈဖကျကို ဖောငျးကားပွုနပွေီဖွဈသော သူမ၏ စောကျဖုတျကွီးပျေါ သို့ တငျ၍ ပေးလိုကျရာ စညျသူစိုးက ဆုပျလိုကျ ပှတျလိုကျဖွငျ့ လုပျပေးနပေါတော့သညျ။
တဖွေးဖွေး ရမကျတှေ သညျးထနျလာ ရသော ခငျမိုးလှငျ တဈယောကျ ဘယျလိုမှ မအောငျ့အငျးနိုငျလောကျအောငျ ဖွဈ၍ လာရတော့သညျ။ “စညျသူ ကုတငျအောကျကို ဆငျးလိုကျ” စညျသူစိုး ကုတငျအောကျသို့ ဆငျး၍ သှားစဉျမှာတော့ အားရပါးရ အလိုး ခံရနျ ရညျရှယျထားသော ခငျမိုးလှငျသညျ လီး တဆုံးဝငျသညျ့ ကုတငျတစောငျးနညျးကိုပငျ ရှေးခယျြ၍ ထားခဲ့သညျ့အတိုငျး သူမ၏ ကိုယျလုံးလေးကို ကုတငျပျေါ တှငျ ကနျ့လနျ့ဖွတျအိပျကာ လုံးတဈနသေော ဖငျသားကွီးမြားကို ကုတငျစောငျးတှငျ တငျ၍ ပေါငျလေးနှဈခြောငျးကို ကားပွီး ကုတငျစောငျးတှငျ တှဲလောငျးလေး ခထြားလိုကျမိသညျ။ အမှေးလေးတှေ ရိပျ၍ ထားသဖွငျ့ ဖှေးဖှေးလေး ဖွဈနကော အဆမတနျပငျ ဖောငျးကား၍ တငျးမာကာစောကျရညျကွညျလေးမြားပငျ စိမျ့ထှကျစီးကြ နပွေီဖွဈသော ခငျမိုးလှငျ၏ စောကျပတျကွီးကို မမှိတျမသုနျ ကွညျ့၍ နရေငျးက စညျသူစိုးသညျ သူမ၏ ပေါငျနှဈလုံးကွားသို့ ဝငျ၍ တိုးကပျလာလတေော့ရာ ခငျမိုးလှငျ၏ လကျတဈဖကျက စညျသူစိုး၏လီးတနျကွီးကို ဖမျး၍ ကိုငျလိုကျရာကလီးတနျကွီးထိပျဖွငျ့ သူမ၏ စောကျပတျအကှဲကွောငျးတလြောကျ ပှတျတိုကျ၍ ပေးနသေညျ။ စောကျစိလေးနရောကို ခပျဖိဖိလေး ပှတျ၍ ပေးသညျ။
ပွီးတော့မှ စညျသူစိုး၏လီးတနျကွီးကို စောကျပတျဝတှငျ တပေ့ေးလိုကျသညျ။ “လုပျ . . လုပျတော့လေ . . . ဟငျ့ . . ” ညုညုလေး အခြှဲလိုကျတှငျတော့ စညျသူစိုး၏ လီးတနျကွီးက သူမ၏ စောကျခေါငျးထဲသို့ ဗွိကနဲ တိုးကာ တဆုံးဝငျ၍ သှားလတေော့ရာ အလုိး ခံရသညျမှာ နှဈနဲ့ခြီပွီး အသဈကဲ့သို့ဖွဈနသေောကွောငျ့ပငျ ခငျမိုးလှငျ၏ ခါးလေးမှာ ကော့၍ တကျသှားရလသေညျ။ ထိုစဉျမှာပငျ ထိတှလေို့ကျရသော အရသာကွောငျ့ ရမကျစိတျတှေ ဟုနျးကနဲ ကွှ၍ လာရသော စညျသူစိုးသညျ သူမ၏ နို့ကွီးနှဈလုံးကို လှမျး၍ ဆှဲလိုကျရာက အားရပါးရပငျ ဆောငျ့၍ လိုးပါလတေော့သညျ။ ခငျမိုးလှငျကလညျး အောကျမှနေ၍ သူမ၏ စောကျပတျဖွငျ့ စညျသူစိုး၏ လီးတနျကွီးကို ညှပျ၍ ညှဈ၍ ဆှဲကာ သူမ၏ စောကျပတျကွီးကို တအငျးအငျး တအဲအဲဖွငျ့ ကော့၍ ကော့၍ ပငျ့တငျပေးနလေသေညျ။ စညျသူစိုး၏ ပွငျးထနျလှသော ဆောငျ့ခကျြမြားကွောငျ့ ခငျမိုးလှငျ၏ ကိုယျလုံးလေးမှာ ရှတေို့းနောကျငငျဖွဈကာ တုနျခါနရေသလို နှဈယောကျအိပျ ကုတငျကွီးပငျ လြှငျ တကြှီကြှီဖွငျ့အျောမွညျ၍ နရေလသေညျ။
ခငျမိုးလှငျကလညျးအားရလိုကျသညျမှာ မပွောပါနှငျ့တော့။ အပြိုစငျလေးတဈယောကျ အလိုး ခံရသလိုပငျ တဟငျးဟငျးဖွငျ့ ဖွတျဖွတျလူးနသေညျ။ သူမ၏ နို့တှကေို ဆုပျနယျ၍ နို့သီးတှကေိုခမြှေတာ တဈပွိုငျနကျတညျး ခံနရေလတေော့ ခငျမိုးလှငျ၏ တဈကိုယျလုံးသညျ အရသာတှေ အီစိမျ့၍ နရေသညျ။ စညျသူစိုး၏ ဆောငျ့ခကျြတှကေ ပွငျးထနျလိုကျသညျမှာ မပွောပါနှငျ့တော့။ လီးတနျထိပျကွီးက သူမ၏ ရငျဝထိပငျ ဝငျသှားရပွီး ဆောငျ့လိုကျတိုငျး သံခြောငျးကွီးလိုဖွဈနသေော လီးတနျကွီးက သူမ၏ စောကျစလေ့ေးကို ဖိကွိတျသလိုဖွဈကာ ကငျြ၍ တကျကာ အသညျးခိုကျအောငျ ခံစားရလသေညျ။ သညျကွားထဲမှ သူမမှာ တစထကျ တစ အားမလိုအားမရ ပို၍ဖွဈလာရသညျ။ တဈကိုယျလုံးတှငျလညျး ခြှေးစေးလေးတှေ ပြံနခေပြွေီ။
“သား . . အငျ့ . . စညျ . . သူ . . ဆောငျ့ ဆောငျ့စမျးပါ မောငျရယျ . . မာမီ . . အငျး . . မမ စောကျပတျကွီး ကှဲသှားအောငျကို ဆောငျ့လိုကျစမျးပါ . . အမလေး . . ဟငျး . . ဟငျး . . မောငျ . . မောငျ . . ရယျ . . ခဈြ . . ခဈြတယျ . . ဟငျး . . ဟငျး . . ” ထိအု ခိုကျမှာပငျ အရသာမြား အီစိမျ့လာကာ ကာမဆိပျမြားတကျ၍ လာရသော စညျသူစိုးကလညျး သူ၏ တဈကိုယျလုံး ရှိရှိသမြှအားကို ညှဈထုတျကာ အားကုနျဆောငျ့၍ လိုးလိုကျပွီး မကွာမီမှာပငျ . . “အမလေး . . မောငျ . . မောငျ . . ဟငျး . . ဟငျး . . ဟငျး . . ကြှတျ . . ကြှတျ . . ကြှတျ . . ” ဟု ခငျမိုးလှငျ၏ ကိုယျလုံးလေးမှာ တှနျ့ခါ၍ သှားရစဉျမှာပငျ စညျသူစိုးသညျလညျး သူ၏ လီးတနျကွီးကို ခငျမိုးလှငျ၏ စောကျပတျကွီးထဲသို့ တဆုံးပငျ ထိုးစိုကျ၍ ဖိကပျလိုကျပွီး သူ၏ ခါးကွီးမှာ ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ ကော့ကာ ကော့ကာ ဖွဈ၍ သှားရလတေော့သညျ။ သူမ၏ သားအိမျထဲတှငျ နှေးကနဲ ဖွဈသှားစဉျကပငျစ၍ စညျသူစိုး၏ သုတျရညျ ပွဈပွဈခဲခဲမြားကို ခငျမိုးလှငျသညျ သူမ၏ စောကျခေါငျးအတှငျးသားလေးမြားဖွငျ့ ဖဈြညှဈလြှကျ ဆှဲငငျလြှကျ မကျမောစှာဖွငျ့ သားအိမျအတှငျးသို့ စုပျယူနပေါလတေော့သတညျး . . ..ပွီးပါပွီ။
ပန်းနုရောင်ပြေးနေသော ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေး ဖနောင့်လေးကို အသာအယာကြွ၍ သွယ်လျှသော သလုံးသားလေးကို ညင်သာစွာ မြှောက်ကြွကာ နောက်ထပ် လှေကားထစ်တစ်ခုကို လှမ်း၍ တက်လိုက်သည်။ ထမီစကတ် အောက်နားစတွင် ခွဲထားသော အကွဲစလေးက ဝဲကနဲ ကွဲဟသွားရာမှ ဖြူဖွေးသော ပန်းနုရောင် ပြေးနေသည့် အသားလေးများကို နုညက်လှသော ပေါင်ဖျားလောက်ထိ တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ သူမ၏ အောက်ဖက် လှေခါးထစ် ၉ ထစ် ၁၀ ထစ်မျှ အကွာမှ လှေခါးပေါ်သို့ လိုက်၍ တက်ခဲ့သော်လည်း အရပ် ၅ ပေ ၇ လက်မလောက်ရှိသော စည်သူစိုး၏ မျက်နှာက သူမ၏ ပေါင်လုံးများ နောက်ဖက်တွင် မျဉ်းတပြေးတည်း ရှိနေသည်။ စကပ်အကွဲစလေး ဝဲကနဲ ကွဲဟသွားချိန်တွင် သာမန်အားဖြင့် သူမ၏ ဒူးဆစ်လေးမျှကိုသာ တွေ့မြင်နိုင်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း လှေခါးအတက် အဆင်းတွင် အထက်နှင့် အောက် ဖြစ်နေသဖြင့် သူမ၏ ပေါင်ဖျားလေးထိပင် တွေ့မြင်၍ နေခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ညင်ညင်သာသာလေးပင် တစ်လှမ်းခြင်း လျှေက်၍ တက်သွားလေသော သူမ၏ နောက်နားမှ အသာကပ်၍ ပါလာခဲ့ရသော စည်သူစိုး၏ ရင်ထဲတွင် တဖြေးဖြေးပင် လှိုက်မော၍ လာရပေသည်။ သူမသည် စည်သူစိုးတို့ အခန်းရှေ့သို့ လှမ်း၍ ခြေထောက်လေးတစ်ဖက်ကို အတက်လိုက်တွင် နောက်ဖက်ခြေထောက်လေးက မကြွမီမှာပင် သူမ၏ လက်အတွင်းမှ ဆွဲ၍ လာသော ကျောပိုးအိတ်လေးကို အသာချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ခါးကို ညွတ်ကာ အပေါ် လှေခါးထစ်သို့ လှမ်း၍ တက်လိုက်သော သူမ၏ ခြေဖျားလေးဆီသို့ လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို လှမ်းလိုက်သည်။ စည်သူစိုး၏ ရင်ထဲတွင် ဒိန်းကနဲ ဖြစ်၍ သွားရာမှ သူသည် လှေခါးထစ်လေးများကို တဆင့်ပြီး တဆင့် လှမ်း၍ တက်လာသော သူ၏ ခြေလှမ်းများကို ရပ်တန့်၍ပင် ထားလိုက်မိသည်။ ခြေထောက်လေးနျစ်ဖက်က အပေါ် ဆင့်သို့ လှမ်း၍ တက်ထားပြီး ခါးကို ကုန်းလိုက်သည်တွင် သူမ၏ နောက်ဖက် အောက်လှေခါးထစ်တွင် ရှိ၍ နေသော စည်သူစိုးသည် ကွဲဟ၍ သွားသော သူမ၏ စကတ်အကွဲလေးမှတဆင့် မြှောက်ကြွ၍ ထားသော သူမ၏ ခြေထောက်လေးကို ပေါင်ရင်းထိပင် သဲကဲစွာ မြင်တွေ့နေရသည်။
အရစ်လိုက်လေး ဖြစ်နေသော သူမ၏ ပေါင်ရင်လေးတွင် အသားစိုင်လေးမှာ တစ်၍ နေသည်။ ဝတ်ထားသော အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပန်းနုရောင်လေးကိုပင် မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။ ကေသီချိုသည် သူမ၏ လက်လေးနှစ်ဖက်ဖြင့် ခြေထောက်လေးရှိ ဘိနပ်သိုင်းကြိုးလေးကို ဖြည်ကာ ပြန်၍ တပ်နေသည်။ စည်သူစိုး၏ လည်ချောင်းတစ်လျောက် ခြောက်သွေ့၍ လာရသည်။ စည်သူစိုး ကျောင်းအပြန်ကို မျှော်ရင်း တိုက်ခန်းတံခါးကို အသာဟကာ ကြည့်လိုက်မိသော ခင်မိုးလွင် တစ်ယောက် ငယ်ရာမှ ကြီးလာသူပီပီ ကေသီချိုတစ်ယောက် စည်သူစိုးကို ပညာပြ၍ နေချေပြီကို အတတ်သိလိုက်သည်။ စည်သူစိုး၏ အကြည့်တွေကလည်း ကောင်မလေး၏ နောက်ဖက်ဆီမှ မခွာချေ။ အသားခပ်လတ်လတ်လေးဖြင့် ဖွေးဖွေးရေးရေးလေးဖြစ်၍ နေသော စည်သူစိုး၏ မျက်နှာလေးသည်ပင်လည်း နီမြန်း၍ ထူအမ်းအမ်း ဖြစ်နေသည်ကို ခင်မိုးလွင်တွေ့လိုက်ရသည်။
သူမသည် လေးတွဲ့သော သက်ပြင်းလေးတစ်ချက်ချကာ လက်နှစ်လုံးမျှသာ ဟထားသော တံခါးကို ပြန်၍ ပိတ်လိုက်လေတော့သည်။ ဖိနပ်သိုင်းကြိုးလေးကို ပြန်၍ တပ်ပြီး ပြန်တော့ ကေသီချိုသည် ဘေးတွင် ချထားသော သူမ၏ ကျောပိုးအိတ်လေးကို ကောက်ယူလိုက်သည်။ ပြီးတော့ စည်သူစိုးတို့၏ တိုက်ခန်းတံခါးရှေကကို ဖြတ်ကျော်၍ တစ်ဆစ်ချိုး လှေကားထစ်များပေါ်သို့ တက်ရောက်၍ သွားလေတော့သည်။ စည်သူစိုးသည် လှေကားထစ်များကို ဆက်၍ တက်လာရင်းက သူ၏ တိုက်ခန်းတံခါးရှေ့သို့ အရောက် လှေကားထစ်များကို ဆက်လက်တက်လှမ်းသွားပြီဖြစ်သော ကေသီချိုထံသို့ လှမ်း၍ အကြည့်လိုက်တွင်တော့ နျစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် ပြုံးပြလိုက်သောသူမ၏ လှပသော အပြုံးလေးကို တွေ့လိုက်ရပြီး မို့ဖောင်းသော သူမ၏ ပါးပြင်လေးတစ်ဖက်တွင် ခွက်၍ သွားရသည့် ပါးချိုင့်လေးကို မက်မောစွာဖြင့်ပင် ငေး၍ ကြည့်နေစဉ်မှာပင် ကေသီချို၏ မျက်နှာလေးမှာ ငုံ့၍ သွားရာမှပင် ခေတ္တမျှ ရပ်တန့်၍ ထားလိုက်ရသော သူမ၏ ခြေထောက်လေးများကို စတင်၍ ရွှေ့လျားလိုက်ပါတော့သည်။
ဟင်းအိုးကို မီးဖိုပေါ် တွင်တင်ကာ အပူပေး၍ နေသော ခင်မိုးလွင်၏ မျက်လုံးတွင် စောစောက သူမတွေ့မြင်ခဲ့ရသော စည်သူစိုးနှင့် ကေသီချိုတို့၏ အဖြစ်အပျက်ကလေးကို ပြန်၍ မြင်ယောင်မိနေသည်။ ခင်မိုးလွင် စဉ်းစားလိုက်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ကြိုက်နေကြသည်တော့ မဟုတ်သေး။ ပြီးတော့ သားဖြစ်သူ စည်သူစိုးကို ခုမှ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်မိသည်။ အရပ်ကလည်း ၅ ပေ ၇ လက်မ လောက်ရှိမည်။ လေ့ကျင့်ခန်း နေ့တိုင်းယူကာ ကစားထားသော စည်သူစိုး၏ ရင်အုပ်ကြီးတွေက ဖုထစ် မို့မောက်၍နေသည်။ လက်မောင်းသားကြီးတွေကလည်း ကြွက်သားတွေ အမြောင်းလိုက် ထ၍ နေသည်။ နုနုငယ်ငယ် မျက်နှာလေးနှင့်ယောက်ျားကြီး တစ်ယောက်လို သန်မာထွားကျိုင်းလှသော ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည်ရှိသည်။ အသက် ၁၇ နှစ် ကျော်ကျော်သာ ရှိသေးသော စည်သူစိုး၏ ရုပ်သွင်သည် မိန်းမသားများအဖို့ အကြိုက်တွေ့စရာပင်။ ဟိုကေသီချို ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကလည်း လွန်လွန်းသည်။ ဒီလောက်ထိအောင်ပင် လုပ်ပြ၍ စည်သူစိုးကိုမြူဆွယ်နေသည်။
လွန်ကို လွန်လွန်းသည်။ ခင်မိုးလွင်သည် စည်သူစိုးကို သဝန်တိုစိတ်တွေက တဖွားဖွားပင် သူမ၏ ရင်တွင် ပေါ် ပေါက်၍ လာရပါတော့သည်.. “မာမီ ဘာချက်” ထုံးစံအတိုင်းပင် ညနေ ကျောင်းက ပြန်လာလေတိုင်း ဝါးတားကူလာမှ ရေတစ်ခွက်ကိုထည့်ကာ သောက်ရင်းမှ စည်သူစိုး မေးနေကြ မေးခွန်းပင် ဖြစ်သည်။ “သားကြိုက်တဲ့ ငါးခေါင်းဟင်းချိုရယ် ကြက်သားကြော်ရယ် နောက် ကြက်အသဲအမြစ်နဲ့ အစိမ်းကြော်တစ်ခွက် ကြော်ထားတယ်” “ဟာ ဒါမှ တို့မာမီကွ” “အို ဟဲ့ ဟဲ့ ကောင်လေး အော် ခက်လိုက်တာ” ဝမ်းသာအားရဖြစ်၍ သွားသော စည်သူစိုးက ခင်မိုးလွင်ကို နောက်ကျောမှ တအားသိုင်း၍ ဖက်ပြီး ခင်မိုးလွင်၏ လည်တိုင်လေးနှင့် ဂုတ်ပိုးလေးတွေအပြင် ပါးပြင်လေးတွေကိုပါ နမ်းနေတော့သည်။ “ကဲ ဒီလောက်တောင် ဖြစ်တဲ့ကောင်လေး သိမယ် ကဲ . . ကဲ . . ကဲ . . ” ခင်မိုးလွင်သည် နောက်သို့ ပြန်လှည့်ကာ စည်သူစိုး၏ ကိုယ်လုံးကို အတင်းပင် ပွေ့ဖက်၍ စည်သူစိုး၏ ပါးပြင်တွေသာမက သူ၏ ရင်အုပ် ဖေါင်းဖေါင်း ကားကားကြီးတွေကို အတင်းပင် ဖိ၍ နမ်းပစ်လိုက်တော့သည်။
ဒီမှာတင် စည်သူစိုးကလည်း ခင်မိုးလွင်၏ ခါးကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွဲ၍ အတင်းဖက်လိုက်ပြီး ခင်မိုးလွင်နမ်းသလိုပင် သူမ၏ မျက်နှာတင်မက ရင်သားမို့မို့ မောက်မောက်ကြီးတွေကိုပါ အတင်းပင် ဖိ၍ ဖိ၍ နမ်းပစ်လိုက်လေတော့သည်။ “အို . . အို . . ” ခင်မိုးလွင်သည် ထိုသို့ မြည်တမ်းလိုက်မိပြီး စည်သူစိုး၏မျက်နှာက သူမ၏ ရင်သားကြီးတွေမှ အကြွတွင်တော့ စည်သူစိုး၏ ကိုယ်လုံးကို ဆွဲ၍ သူမ၏ ရင်သားဆိုင်ကြီးများကို စည်သူစိုး၏ ရင်အုပ်ကျယ်ကြီး ပိပြားသွားရလောက်အောင်ပင် ဖိကပ်ကာ ဖက်လိုက်ပြီး ပါးချင်းအပ်၍ ဖက်ထားလိုက်မိပါတော့သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် စည်သူစိုး၏ မို့မောက်သော ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးအောက်မှ တဒိန်းဒိန်းဖြင့် ခုန်၍နေသော ရင်ခုန်သံများကို ခင်မိုးလွင်သည် သတိပြုမိလိုက်သည်။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ခပ်ကြာကြာလေး ဖက်ထားကြပြီးတော့မှ ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ ကိုယ်လုံးကို စည်သူစိုး၏ ရင်ခွင်တွင်းမှ ခွာ၍ ထွက်လိုက်သည်။
“သား ဒီနေ့ညနေ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်နဲ့တော့ တခါထဲသာ ရေချိုးလိုက်တော့ မာမီ ထမင်းဆာနေပြီ . . သားရေ ချိုးပြီးရင် တခါထဲ ထမင်းစားလိုက်ကြမယ်နော် ဟုတ်လား . . ” “အင်း . . သား ရေသွားချိုးတော့မယ်” ပြောရင်း ဆိုရင်း လှည့်၍ ထွက်သွားသော စည်သူစိုး၏ ကျောပြင်ကြီးကို ခင်မိုးလွင်သည် နောက်မှနေ၍ ငေးကာ ကြည့်နေမိသည်။ စည်သူစိုးတစ်ယောက် လူလားမြောက်၍ ယောက်ျားကြီး လုံးလုံးပင် ဖြစ်၍ နေလေပြီ။ စောစောက စည်သူစိုး ဝင်လာစဉ်က ရေသောက်အပြီး သူမကို နောက်ကျောမှနေ၍ တင်းကြပ်စွာ ပွေ့ဖက်လိုက်စဉ်က သူမ၏ ဖင်သားကြီးတွေပေါ် သို့ ထိထိမိမိလာပြီး ထောက်လိုက်ခဲ့သော စည်သူစိုး၏ ပစ္စည်းကြီးက နဲနဲနောနောမဟုတ်။ ပြီးတော့ မာကြောသန်မာလိုက်တာလည်း မပြောပါနှင့်တော့။
စပြီး နောက်မှနေ ဖက်လိုက်တော့ သူ့ဟာကြီးက ဒိုင်းကနဲ သူမ၏ တင်သားကြီးတွေပေါ် ကို ထောက်လိုက်သည်ဆိုသည်နှင့် ခင်မိုးလွင်၏ ခါးလေးသည် ရှေကသို့ပင် ကော့ကနဲ တက်၍ သွားရလေသည်။ ပြီးတော့မှ သူ့ဟာကြီးက မာကြောလွန်းလှသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် နှစ်ခုတို့ ဖိကပ်မိစဉ်တွင် အောက်သို့ စိုက်၍ ကျမသွားပဲ အပေါ် သို့ ချော်၍ ထိုးတက်သွားကာ သူမ၏ တင်သားကြီးတွေပေါ် အချောင်းလိုက် ကပ်နေချေတော့သည်။
ဒါ . . ဒါ စောစောက လှေခါးမှာ ကေသီချိုဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ကြည့်ပြီး ထောင်ထလာခဲ့တဲ့ ဟာကြီးပဲ ဖြစ်ရမည်။ ခုထိပင် အစွမ်းကုန် မာကြောလို့နေသေးသည်။ တော်တော့ကို သန်မာလှသည်ပဲ။ ခင်မိုးလွင်သည် မီးဖိုဘက်ကို ပြန်၍ လှည့်လိုက်ရာက မီးဖိုခလုတ်ကို ပိတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဖိုပေါ် မှ ဟင်းချိုအိုးကို အဖုံးပိတ်ပြီး မီးဖိုဆောင်မှ ထွက်၍ လာခဲ့တော့သည်။ ထိုနောက် အိပ်ခန်းထဲသို့ ရောက်၍ လာသော ခင်မိုးလွင်သည် ခေါင်းအုံးအောက်မှ သော့တွဲကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ နံရံကပ်ဘီရိုဆီသို့ သွားပြီး အံဆွဲတစ်ခုကို သော့ဖွင့်၍ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အံဆွဲထဲမှ ထွက်ပေါ် ၍ လာသော ဗီစီဒီချပ်များကို တစ်ချပ်ခြင်း ကြည့်ကာ ဗီစီဒီ ၂ ချပ်ကို ရွေးထုတ်လိုက်လေသည်။ ပြီးတော့ အံဆွဲကို ပြန်ပိတ်ပြီး သော့ခတ်ကာ သော့တွဲကို ခေါင်းအုံးအောက်သို့ ပြန်၍ ထားလိုက်ပြီးမှ ခင်မိုးလွင်သည် ဧည့်ခန်းထဲသို့ ထွက်၍ အလာတွင် ရေချိုးခန်းထဲမှ ရေချိုးနေသော စည်သူစိုး၏ သီချင်းသံ အေးအေးကို ကြားလိုက်ရလေသည်။
ခင်မိုလွင်တစ်ယောက်ဧည့်ခန်းထဲသို့ရောက်တော့ သူမ၏ လက်အတွင်းတွင် ပါ၍လာသော ဗီစီဒီ ၂ ချပ်ကို အခြား ဗီစီဒီချပ်တွေ၏ အပေါ် ယံတွင် တင်ထားလိုက်ပြီး မီးဖိုဖက်သို့ ခပ်သွက်သွက်လေးပင် ပြန်၍ လာခဲ့တော့သည်။ ရေချိုးခန်းထဲမှ စည်သူစိုး၏ သီချင်းသံကတော့ ခပ်သဲ့သဲ့ လွင့်ပျံ့ဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ရေချိုးခန်းတံခါးရှေ့တွင် ရပ်လိုက်ပြီးတော့မှ ခင်မိုးလွင်သည် တွေ၍ သွားရသည်။ ပြီးမှ သက်ပြင်းလေးတစ်ချက် ချလိုက်ပြီး သူမ၏ လက်တစ်ဖက်က ရေချိုးခန်းတံခါးပေါ် ရှိ ဒိုးလော့ကို အသာလေး လှည့်ဖွင့်လိုက်လေသည်။ အတွင်းက ဘယ်တော့မှ လော့မချထားသည်ကို ခင်မိုးလွင်က သိပြီးသားပင်ဖြစ်၏။ ဒိုးလော့ကို လှည့်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှ ခင်မိုးလွင်သည် တံခါးကို အသာလေး ဟလိုက်သည်။
“ဟင် . . မာမီ” “ရော့ သား ဆပ်ပြာ အထဲမှာ ဆပ်ပြာ ကုန်ခါနီးနေပြီမို့လား . . သားမလောက်မှာစိုးလို့” ခုလေးတင် မီးဖိုဆောင်ထဲရှိ နံရံကပ်ဘီရိုထဲမှ ထုတ်ယူလာခဲ့သော ဆပ်ပြာမွှေးတစ်တုံးကို လှမ်း၍ ပေးလိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးတစ်ယောက် ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ရေချိုးနေရာမှ ရေချိုးခန်းတံခါးဝရှိ သူမထံသို့ လျှောက်၍ လာလေသည်။ ဆပ်ပြာတုံး ကိုင်ထားသော ခင်မိုးလွင်၏ လက်လေးသည် တုန်တုန်ယင်ယင်လေး ဖြစ်၍ နေလေသည်။ အနားရောက်တော့ ခင်မိုးလွင်၏ လက်ထဲမှ ဆပ်ပြာကို ယူ၍ လှည့်ဝင်သွားလေတော့သည်။
ဒီတော့မှ ခင်မိုးလွင်က သတိရပုံဖြင့် “သားမြန်မြန်ချိုးနော် အအေးပတ်နေဦးမယ် ပြီးတော့ မာမီလည်း ချိုးအုံးမှာ” “ဟုတ်ကဲ့ သားပြီးတော့မှာပါ . . .” ရေချိုးခန်းတံခါးကို ပြန်ပိတ်ပြီးသည်နှင့် လှည့်၍ ထွက်လာသော ခင်မိုးလွင်သည် သောက်ရေ အေးအေးလေးတစ်ခွက်ကို အပြေးအလွှားလေး သောက်လိုက်မိသည်။ စည်သူစိုးတစ်ယောက် ရေချိုးပြီး၍ ရေချိုးခန်းထဲမှ လှမ်း၍ အထွက်တွင်တော့ အပြင်တွင် ထမီရင်လျားဖြင့် ရပ်၍ နေသော ခင်မိုးလွင်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ စည်သူစိုး ရေချိုးခန်းထဲမှ လှမ်း၍ အထွက်မှာပင် ခင်မိုးလွင်က ရေချိုးခန်းထဲသို့ လှမ်း၍ ဝင်လိုက်လေသည်။ စည်သူစိုးက ခေါင်းညိတ်ပြ၍ ထွက်သွားလေသည်။ ခင်မိုးလွင်ကတော့ စည်သူစိုးကို ကျောခိုင်းပြီး ရေချိုးခန်းထဲသို့ လှမ်း၍ ဝင်သွားလေသည်။ ခဏမျှအကြာတွင်တော့ စည်သူစိုး၏ အသံက ရေချိုးခန်းတံခါးဝမှ ထွက်ပေါ် ၍ လာသည်။ စောစောကထဲက ခင်မိုးလွင်မှာ ရေချိုးခန်းတံခါးကို ပိတ်၍ မထားခဲ့ပေ။
“မာမီ . . ဒီမှာ ဘီး . . ” “ခဏလေး . . ခဏလေး . . ” ရေချိုးခန်းထဲရှိ မှန်ရှေ့တွင် ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ရပ်ကာ မျက်နှာကို ဆပ်ပြာဖြင့် ပွတ်တိုက်နေသော ခင်မိုးလွင်က လှမ်း၍ ပြောလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ သူမ၏ မျက်နှာပေါ် မှ ဆပ်ပြာများကို ရေဖြင့်ဆေးကာ မျက်နှာသစ်လိုက်ပြီး ဆပ်ပြာများ စင်ကြယ်သွားတော့မှ မျက်နှာပေါ် ရှိ ရေများကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သပ်လိုက်ရင်း ခင်မိုးလွင်သည် ရေချိုးခန်းဝသို့ လျှောက်၍ လာသည်။ စည်သူစိုး၏ လက်ထဲမှ ဘီးကို လှမ်း၍ အယူလိုက်တွင်တော့ စူးရှ တောက်ပြောင်၍ အရည်လဲ့နေသော စည်သူစိုး၏ မျက်လုံးများနှင့် ဘီးကို ကိုင်၍ လှမ်းပေးနေသော တဆတ်ဆတ်ဖြင့် သိသိသာသာ တုန်ခါနေသည့် စည်သူစိုး၏ လက်ဖျားလေးတို့ကို ခင်မိုးလွင်သည် သတိထားမိလိုက်ပါတော့သည်။
ခင်မိုးလွင်၏ အသက်သည် ၃၄ နှစ်ထဲသို့ ချင်းနင်းဝင်ရောက် လာခဲ့ပေပြီဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကျော်ကပင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးသည် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရသည် ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ် ကျောင်းသူဘဝထဲက သူမ၏ အချောအလှတွေကြောင့် ခင်မိုးလွင်၏ ဝန်းကျင်တွင် ယောက်ျားတို့မှာ ပျားပိတုန်းများပမာ တရစ်ဝဲဝဲဖြင့် ရှိခဲ့ရလေသည်။
ဒီကြားထဲကမှ ခင်မျိုးလွင်သည် ဦးမောင်မောင်စိုးနှင့် အကြောင်းပါ၍ လက်ဆက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဝင်းဝါသော ရွှေဝါရောင် အသားအရည်လေးနှင့် အရပ်အမြင့်က ၅ ပေ ၆ လက်မလောက်ရှိပြီး အရပ်အမြင့်နှင့် လိုက်လျောုညီထွေသော လှပတောင့်တင်းသည့် အချိုးအစား ကျနလှသော ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့၍လည်း အထက်တန်းကျောင်းသူ ဘဝ၌ပင် ကာယအလှမယ်ဘွဲ့ကို တစ်ကြိမ်မက ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ သူလည်း ဖြစ်သည်။ သည့်နောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ကျပြီးသည့် အချိန်တွင်လည်း သူမ၏ အလှအပများကို ခင်မျိုးလွင်သည် ထိန်းသိမ်း၍ ထားနိုင်ခဲ့လေသည်။ နာမည်ကျော် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု၏ မန်နေဂျာကြီးဖြစ်သော ဦးမောင်မောင်စိုးက ခင်မျိုးလွင်ကို မပူမပင် မကြောင့်မကျ ထားနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ ငြိမ်းငြိမ်းနေ ကောင်းကောင်းစားကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုးမွေးသလိုမွေး၍ ခင်မိုးလွင်တစ်ယောက် လှချင်တိုင်းလှ၍ နေခဲ့လေသည်။
ရင်းနှီးသူတချို့ကဆိုလျှင် အပျိုတုန်းကထက်ပင် ပို၍ လှလာသေးသည်ဟုချီမွမ်းထောပနာပင် ပြုကြရသည်။ အပျိုဘဝကပင်စ၍ အိမ်ထောင်ကျပြီးအချိန်။ ထို့နောက် ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်ပြီးသည့် အချိန်နောက်ပိုင်းတို့တွင်လည်း ယခုအချိန်ထိပင် ခင်မိုးလွင်သည် ကျန်းမာရေးကို အထူးပင် ဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ ကာယအလှ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ယနေ့ထိ မပျက်ခဲ့ပေ။ ဒီတော့ ယခုဆိုလျှင် ခင်မိုးလွင်သည် အင်္ဂါစုံလင်စွာဖြင့် အစွမ်းကုန် ပွင့်နေသည့် ပန်းတစ်ပွင့်နှယ် ငွါးငွါးစွင့်စွင့်ဖြင့် တင့်တယ်စွာ လှပ၍ နေရလေသည်။
မုဆိုးမလေး ခင်မိုးလွင်ကို လိုချင်သူတွေက ဒုနှင့်ဒေးရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးက ပစ္စည်းဥစ္စာ ငွေကြေးများ လုံလောက်စွာ ထားခဲ့သည့်အပြင် ဦးမောင်မောင်စိုး ရှိနေစဉ်ကပင် ယုံကြည်စိတ်ချရ၍ အကျိုးအမြတ်ရှိသော လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ထားခဲ့သည်ဖြစ်၍ ရရှိသော အကျိုးအမြတ်များမှာ သူမတို့အတွက် အလျှံအပယ် ဖြစ်နေခြင်းနှင့် စည်သူစိုး၏ နောင်ရေးတို့ကြောင့် ခင်မိုးလွင်သည် ကမ်းလှမ်းလာသူ ဟူသမျှတို့ကို လက်မခံပဲ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်ချည်းပင် ဖြစ်သည်။ ခင်မိုးလွင်နှင့် သူမ၏ ခင်ပွန်း ဦးမောင်မောင်စိုးတို့သည် ကံတူ အကျိုးပေးများဟု ဆိုနိုင်သူများဖြစ်ပါသည်။
ဦးမောင်မောင်စိုးသည် တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်၍ မိတဆိုး တစ်ယောက်လည်းဖြစ်၏။ ဖခင်ဖြစ်သူမှာလည်း ပြည်ပသို့ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး ပြည်ပတွင်ပင် အိမ်ထောင်ကျလျက်ရှိနေပေပြီ။ ခင်မိုးလွင်သည်လည်း တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်၍ ဖတဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ မိခင်ဖြစ်သူမှာလည်း သူမ အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင် ကွယ်လွန်၍ သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယခုတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးကပါ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုတော့ ခင်မိုးလွင်သည် လောကအလယ်တွင် မျက်စေ့သူငယ် နားသူငယ်ဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့သော စည်သူစိုးကိုသာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းဖြင့် သူမ၏ နေ့ရက်များကို အေးချမ်းသာယာစွာဖြင့် ကုန်လွန်စေ ခဲ့လေသည်။
ယခုဆိုလျှင် စည်သူစိုးသည် ၁၀ တန်းပင် အောင်မြင်ပြီးဖြစ်၍ မကြာမီ လပိုင်းတွင် တက္ကသိုလ်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါက ပထမနှစ်သို့ တက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယခု အားလပ်ရက်တွင် အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းသို့ တက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည် ဖတဆိုးလေးဖြစ်သော စည်သူစိုးကို ခင်မိုးလွင်သည် သူမ ကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်စဉ် ကလေးဘဝထဲက ဖတဆိုးလေး ဖြစ်ခဲ့ရသူဖြစ်၍ အတော်ပင် စာနာမိကာ ခါတိုင်းထက်ပင် ပို၍ ဂရုတစိုက်ဖြင့် ချစ်ခင်ယုယကာ ပြုစုလာခဲ့ရသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စည်သူစိုး၏ အနွံအတာကို ရင်စည်းပြီးခံခဲ့သည်။ စည်သူစိုး မျက်နှာ တစ်ချက် မညှိုးစေရ။ စည်သူစိုး လက်ညှိုးညွှန်သမျှ တောင်းတသမျှ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် သူမသည် ဖန်တီးပေးခဲ့သည်ချည်းပင် ဖြစ်သည်။
စည်သူစိုးကလည်း လိမ္မာရေးခြားရှိသူ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ခင်မိုးလွင် ပြောသမျှ ဆိုသမျှကို ခေါင်းငြိမ့် လိုက်နာခဲ့သည်ချည်းပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့လည်း စည်သူစိုးသည် ခင်မိုးလွင်ကို အတော်ပင် ချစ်ရှာသည်။ ဤသို့ဖြင့်ပင် ဦးမောင်မောင်စိုး ကွယ်လွန်ပြီးခဲ့သည့် နေ့ရက်မှစ၍ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တွယ်တာ အားကိုးစိတ်များဖြင့် အချိန်ကာလများကို ဖြတ်သန်း ကျော်ဖြတ်လာခဲ့သည်မှာ ယနေ့အချိန်ထိပင် ဖြစ်သည်။ အိပ်ခန်းထဲရှိ ဒရင်းဘက်ပေါ် တွင် လှဲကာ မဂ္ဂဇင်းဖတ်၍ နေသော ခင်မိုးလွင်သည် မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို ပိတ်၍ ဘေးရှိ စားပွဲလေးပေါ် သို့ တင်လိုက်သည်။
ပြီးတော့ ဒရင်းဘက်ပေါ် မှ ထလိုက်ရင်း အိပ်ခန်းနံရံမှ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ည ၁၁ နာရီပင် ရှိပေပြီ။ အိပ်ခန်းဝသို့ သွား၍ အပြင်သို့ ကိုယ်တခြမ်းထွက်ကာကြည့်လိုက်တော့ စည်သူစိုးတစ်ယောက် ဧည့်ခန်းထဲတွင် ဗိစီဒီ ကြည့်၍ ကောင်းနေဆဲပင် ဖြစ်သည်ကို တွေ့လိုက်ရ၍ ခင်မိုးလွင်သည် အိပ်ခန်းထဲသို့ ပြန်၍ ဝင်လာခဲ့ပြီး စည်သူစိုး၏ကုတင်ဆီသို့သွား၍ ကုတင်ထက်ရှိ အိပ်ယာလေးကို ပြင်ဆင်၍ ပေးလိုက်လေသည်။ ခင်မိုးလွင်တို့ အိပ်ခန်းကြီးမှာ အလျား ၂၅ ပေနှင့် အနံ ၁၂ ပေမျှရှိသော အိပ်ခန်းကျယ်ကြီးပင်ဖြစ်သည်။ အိပ်ခန်းအလျား၏ အလယ်တွင် အိပ်ခန်းဝင်ပေါက်ရှိကာ ထိုဝင်ပေါက်ကို ဗဟိုပြု၍ တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ စည်သူစိုး၏ အိပ်ခန်းဖြစ်သည်။ ကျန်တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ ခင်မိုးလွင်၏ အိပ်ခန်းဖြစ်သည်။
အိပ်ခန်းဝင်ပေါက်ရှိရာ နံရံနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ နံရံကို ခေါင်းရင်းပြုပြီး ကုတင်နှစ်လုံးကိုယှဉ်လျက်သား ချထားပြီး ထိုကုတင်နှစ်လုံး၏ အကြားတွင် ခေါက်ကာလေးတစ်ခုဖြင့် ဟိုဖက်ခြမ်းဒီဖက်ခြမ်း ပိုင်းခြား၍ ထားလေသည်။ စည်သူစိုး၏ ကုတင်လေးမှာ တစ်ယောက်အိပ် ကုတင်ဖြစ်ပြီး ခင်မိုးလွင်ကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရှိစဉ်ကတည်းက အတူအိပ်ခဲ့သည့် နှစ်ယောက်အိပ် ကုတင်ကြီးဖြင့်ပင်အိပ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်၏ ကုတင်နှစ်လုံးကြားတွင် တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် ပိုင်းခြားထားသော ခေါက်ကာလေး တစ်ခုသာ ကြားတွင်ခံပြီး ကုတင်နှစ်လုံးမှာ ထိစပ်၍နေကြသည်။ စည်သူစိုး၏ အိပ်ယာလေးကို ခင်းကျင်းပြီးသွားသော အခါတွင်တော့ ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ အခန်းဖက်သို့ ပြန်၍ လာခဲ့ပြီး သူမ၏ ကိုယ်ပေါ် မှ အဝတ်အစားများကို ချွတ်ကာ ညဝတ် အင်္ကျီလေးကို တစ်ထပ်တည်း ဝတ်လိုက်သည်။
ပြီးတော့ ကုတင်လေးနှစ်လုံးကြား ခေါက်ကာလေး၏ ထိပ် အပေါ် ဖက်နံရံတွင်ရှိသော ညအိပ်မီးလုံး အပြာရောင်လေးကို ဖွင့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ အိပ်ခန်းထဲရှိ မီးများကို ပိတ်လိုက်ပြီး သူမ၏ ကုတင်ပေါ် သို့ တက်၍ လှဲလိုက်လေသည်။ လက်ပွန်းတတီးနေခဲ့ပြီးမှ သူမ၏ မျက်လုံးထဲတွင် ကလေးဟုသာ မြင်နေခဲ့သော စည်သူစိုးတစ်ယောက် ညနေက ကေသီချိုနှင့် တခဏအကြာ လူငယ်သဘာဝ စိတ်ကစားနေကြသည်ကို တွေ့လိုက်ရတော့မှ စည်သူစိုးတစ်ယောက် လူလားမြောက်ခဲ့ရပြီဆိုသည်ကို သတိထားလိုက်မိခဲ့သည်။ ပြီးတော့ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်အပေါ် တွင် တပ်မက်သည့် စိတ်များပင်ဝင်၍ နေချေပြီ။
ဒီတော့လဲ လိင်ကိစ္စတွေကို ဗဟုသုတ အလို့ငှာ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးပါ စေတော့ဟု ရည်ရွယ်၍ ဗီစီဒီ ၂ ချပ်ကို စည်သူစိုး အလွယ်တကူ တွေ့၍ ကြည့်မြင်သွားစေရန် ခင်မိုးလွင်သည် စီစဉ်၍ ချထားခဲ့မိသည် တဆက်တည်းမှာပင် ရေချိုးနေစဉ် သူမ တွေ့မြင်ခဲ့ရသော စည်သူစိုး၏ လိင်တန်ကြီးကသူမ၏ အမြင်အာရုံထဲသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ အရှည် ၇ လက်မလောက်နှင့် လုံးပတ်က ကျပ်လုံးခန့်ရှိသည်။ ထိပ်က အရေပြားလေးက ဟတယ် ဆိုရုံလေးသာ ရှိသေးသည်။ ရေချိုးခန်းဝမှ ဆပ်ပြာလှမ်း၍ ပေးနေသော သူမ၏ ထံသို့ လျောက်၍ လာတော့ လိင်တန်ကြီးမှာ တရမ်းရမ်းနှင့် သူမဆီသို့ ချဉ်းကပ်လာသည်ကို ကြည့်မိပြီး ခင်မိုးလွင်တစ်ယောက် ရေချိုးပြီးသည်မှာ တစ်နာရီလောက်ပင်ရှိသော်လည်း ချက်ခြင်းပင် ရေပြန်ချိုး၍ သူမ၏ ကိုယ်လုံးတီး ခန္ဓာကိုယ်ကို စည်သူစိုးမြင်အောင် ပြန်၍ ပြခဲ့မိသည်ကို ခင်မိုးလွင်သည် သူမဘာသာပင် အံသြနေရလေသည်။
ယခုတော့ စည်သူစိုးတစ်ယောက် ဧည့်ခန်းထဲတွင် တစ်ယောက်တည်း ထိုင်၍ ခင်မိုးလွင်ထားခဲ့သော အပြာကား ဗီစီဒီချပ်တွေကို ကြည့်နေမည်မှာသေချာသည်ဟု ခင်မိုးလွင်သည် တွေးမိလိုက်ပါတော့သည်။ အိပ်ယာပေါ် တွင်မှေး၍နေသော ခင်မိုးလွင်သည် ဘယ်အချိန် အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည် မသိ။ သူမ အိပ်နေသော ကုတင် လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်ဖြစ်၍ နိုးလာခဲ့ရသည်။ မျက်လုံးဖွင့်၍ ကြည့်လိုက်တော့ သူမ၏ ကုတင်နှင့် ကြားတွင် ခေါက်ကာလေးသာခြား၍ ထိစပ်နေသော စည်သူစိုး၏ ကုတင်ဆီမှ တလှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေကြောင်း သိလိုက်ရသည်နှင့် ခင်မိုးလွင်သည် ချက်ခြင်းဆိုသလိုပင် အိပ်ယာပေါ် မှထ၍ ကုတင်ပေါ် မှ ဆင်းပြီး တစ်ဖက်ရှိ စည်သူစိုး၏ ကုတင်ရှိရာသို့ တိုးကပ်၍ လာကာ ကြည့်လိုက်မိသည်။
“ဟင် . . ” ခင်မိုးလွင်၏ ရင်ထဲတွင် နွေးကနဲ ဖြစ်၍သွားရတော့သည်။ စည်သူစိုးတစ်ယောက် ဝတ်ထားသော ပုဆိုးကို ခါးဆီသို့ ဆွဲ၍ လှန်တင်ပေးထားကာ မျက်စိနှစ်လုံးကို စုံမှိတ်ထားပြီး သူ၏ လက်တစ်ဖက်ကတော့ ထောင်မတ်၍ နေသော သူ၏တန်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်၍ တစ်ချက်ခြင်း ဂွင်းတိုက်၍ နေလေသည်။ မျက်စိနှစ်လုံးကို စုံမှိတ်၍ နေသော စည်သူစိုး၏ အမြင်အာရုံထဲတွင်တော့ ယခုတင် သူကြည့်ခဲ့သော အပြာကားထဲမှ ကာမစပ်ယှက်နေကြသော ပုံရိပ်များ၊ ညနေက လှေခါးတွင် တွေ့ခဲ့ရသော ကေသီချို၏ အလှအပများနှင့် ညနေကပင် ရေချိုးခန်းတွင် တွေ့မြင်ခဲ့ရသော ခင်မိုးလွင်၏ ဝင်းဝါ၍ လှပသော ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးများတို့သည် တလှည့်စီ မြင်ယောင်၍ နေမိသည်။
အထူးသဖြင့် မာမီ ခင်မိုးလွင်၏ တင်းရင်း၍ လုံးဝန်းနေသော ရင်သားများ ဖြူဖွေးအိစက်ကာ တလုံးတခဲကြီးဖြစ်နေသော ကားစွင့်နေသည့် တင်သားများ ပြီးတော့ ဖေါင်းဖေါင်းလေး ခုံးထနေသည့် အမွှေးပါးလေးများဖြင့် စောက်ဖုတ်လေးတို့သည် သူ့ကို လွှမ်းခြုံစိုးမိုး၍ နေတော့လေသည်။ ခင်မိုးလွင်သည် စည်သူစိုး၏ အဖြစ်ကို တွေ့လိုက်သည်နှင့် ချက်ခြင်းပင် သူမ ကုတင်ရှိရာ အခန်းဖက်သို့ ကူးလာခဲ့ပြီး ကုတင်ဘေး စားပွဲပေါ် ရှိ စာကြည့်စားပွဲတင် မီးလုံးလေးကို ဖြတ်ကနဲ ဖွင့်လိုက်ရာက စားပွဲပေါ် ရှိ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ် သို့ အားဖြင့် ပစ်ကာ ချလိုက်ရာ စာအုပ်နှင့် ကြမ်းပြင်တို့ ထိမိသံသည် တိတ်ဆိတ်သောညတွင် ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ် ၍ လာလေသည်။ ဖြတ်ကနဲ လင်းလာသော အလင်းရောင်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း ကြားလိုက်ရသော အသံတို့ကြောင့်ပင် စည်သူစိုးသည် မျက်လုံးကိုဖွင့် လက်ကိုရုတ်၍ နားစွင့်လိုက်မိသည်။
ပြီးတော့ အိပ်ယာပေါ် မှ လူးလဲထကာ ခင်မိုးလွင် ရှိရာဖက်သို့ကူး၍ အလာတွင်တော့ ကြားတွင်ကာထားသော ခေါက်ကာလေးကို ကျော်၍ အထွက်လိုက်မှာပင် မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကြောင့် စည်သူစိုးသည် နောက်သို့ ဆုတ်၍ ခေါက်ကာလေးအတွင်းတွင် ဝင်ရပ်ကာ ကိုယ်တစ်ခြမ်းထွက်၍ ခင်မိုးလွင် ကုတင်ရှိရာသို့ ကြည့်၍ နေမိသည်။ ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ ကိုယ်ပေါ် တွင် အဝတ်အစား ဟူသမျှ ဘာမျှ မရှိတော့ပဲ သူမ၏ ကိုယ်တုံးလုံးတီးလေးကို ကုတင်ပေါ် တွင် ပက်လက်လှန်ကာ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ထောင်၍ ပေါင်လုံးဖွေးဖွေးကြီးတွေကို အတော်ပင် ကား၍ ထားလေသည်။ ပြီးတော့ မျက်လုံးနှစ်လုံးကိုလည်း စုံမှိတ်၍ ထားသည်ကို စားပွဲတင်မီးလုံးလေး၏ အလင်းရောင်ဖြင့် ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့၍ နေရလေသည်။ ပြီးတော့ ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲသို့ လက်ထည့်၍ ခုံးမောက်နေသော သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို တစ်ချက်ခြင်း ပွတ်ပေးနေလေသည်။
စည်သူစိုးသည် အကွယ်မှ ကိုယ်တစ်ခြမ်းသာသာပင် ထွက်၍ လာပြီး သူ၏ ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ရာမှ တဆင့် ထွက်ပေါ် ၍ လာသော သူ၏ တန်ကြီးကို လက်တစ်ဖက်က ကိုင်၍ ခင်မိုးလွင်ကို ကြည့်ကာ ဂွင်းတိုက်ပါတော့သည်။ ခဏနေတော့ ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ မှိတ်ထားသော မျက်လုံးလေးများကို အသာလေးမှေး၍ ဖွင့်ကာကြည့်လိက်ုရာ စည်သူစိုး၏ အဖြစ်ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်နှင့် သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို အိပ်ယာပေါ် သို့ မှောက်ချလိုက်ပြီး သူမ၏ ကုတင်ခြေရင်းဘက် တစ်ဖက်ထောင့်နားတွင် ရှိနေသော စည်သူစိုးဘက် ကျောပေးကာသူမ၏ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ထောက်လိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကတော့ တတောင်ဆစ်မျှဖြင့်သာ ထောက်၍ ဖင်ဗူးတောင်း ထောင်ပစ်လိုက်လေသည်။
ခင်မိုးလွင်၏ နဂိုထဲကမှ လုံးတစ်လှသော ဖင်သားကြီးများမှာ ပို၍ ကားအယ်သွားရကာ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးဖြင့် မက်မောစရာကြီး ဖြစ်လို့နေတော့သည်။ သူမ၏ လက်တစ်ဖက်က ပေါင်ကြားတွင်ထည့်၍ သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပွတ်လိုက်ရင်း သူမ၏ ပေါင်ကြားထဲမှ တဆင့် စည်သူစိုးထံသို့ ကြည့်လိုက်ရာ စည်သူစိုး၏ ဂွင်းတိုက်နေသော လက်သည် စောစောကထက် ပို၍ သွက်လာသည်ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။ သူမသည် ခဏမျှအကြာတွင်တော့ ဖင်ဗူးတောင်းထောင်ထားသော သူမ၏ ကိုယ်လုံးကို အိပ်ယာပေါ် သို့ ပြန်လှဲချလိုက်ကာ ပက်လက်လှန်လိုက်ပြန်သည်။ ပြီးတော့ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ဆွဲ၍ ထောင်လိုက်ပြီး ပေါင်ဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံးကို အစွမ်းကုန် ကားလိုက်ရင်း မျက်လုံးလေးများကို မှေးကာ စည်သူစိုးထံသို့ ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ စည်သူစိုး၏ ကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံးသည် ခေါက်ကာအကွယ်မှပင် ထွက်၍ နေချေပြီ။ သူ၏ လက်ကတော့ ပို၍ ပို၍ပင် သွက်၍ နေတော့သည်။
ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ လက်တစ်ဖက်ကို ပေါင်ကြားဆီသို့ ထည့်လိုက်ပြန်သည်။ ပြီးတော့ ဖောင်းမို့၍ နေသော သူမ၏ နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခုကို လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ဖြဲဟလိုက်တော့ နီရဲလှသော အတွင်းသားများနှင့်အတူ သူမ၏ စောက်စေ့လေးမှာ ငေါက်တောက်လေး ထွက်ပေါ် ၍ လာလေသည်။ ထိုအခါတွင်မှ ခင်မိုးလွင်၏ ကျန်နေသော လက်တစ်ဖက်ကပါ ပေါင်ကြားသို့ ရောက်လာပြီး စောက်စေ့လေးကို လက်ချောင်းထိပ်လေးဖြင့် ပွတ်လိုက် နှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေကို ပွတ်လိုက်ဖြင့် လုပ်နေတော့သည်။ မကြာမှီအချိန်တွင်တော့ စည်သူစိုး၏ ခါးသည် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ဖြစ်၍ သွားသည်ကို ခင်မိုးလွင် လှမ်း၍ တွေ့မြင်လိုက်ရပါလေတော့သည်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ခင်မိုးလွင် အိပ်ယာမှနိုးလျှင်ပင် မနက် ၇ နာရီလောက် ရှိနေချေပြီ။ စည်သူစိုးကတော့ မနိုးသေးပေ။ ထုံးစံအတိုင်း ၈ နာရီလောက်မှ နိုးချေလိမ့်မည်။
အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်ရန် အခန်းတံခါးဝဆီသို့ လာခဲ့သော ခင်မိုးလွင်သည် တံခါးဝသို့ မရောက်မီမှာပင် စည်သူစိုး အိပ်နေရာသို့ လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်မိသည်။ အိပ်ယာပေါ် တွင် ပက်လက်ကလေး မျက်နှာနုနုလေးကို တစောင်းလေးလုပ်လျက် အိပ်ပျော်နေသော စည်သူစိုးကို တွေ့လိုက်ရတော့ ခင်မိုးလွင်၏ ရင်ထဲတွင် အေးချမ်းကာကြည်နူး၍ သွားရလေသည်။ သူမသည် ခဏကြာရပ်၍ ကြည့်နေပြီးမှ အိပ်ခန်းပြင်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ ခင်မိုးလွင်တစ်ယောက် နံနက်စာစောစောအတွက် အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးချိန်လောက်မှ စည်သူစိုးက အိပ်ယာပေါ် မှ နိုး၍လာသည်။ မျက်နှာသစ်ရန် မီးဖိုဆောင်ထဲသို့ ဖြတ်၍ အသွား သူမကို တစ်ချက် စူးစူးစိုက်စိုက်လေးကြည့်၍ သွားသော စည်သူစိုးကို ခင်မိုးလွင် သတိပြုမိလိုက်သည်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လှမ်း၍ စကားမပြောဖြစ် ခပ်အမ်းအမ်းလေး ဖြစ်၍ နေသည်။ ဒီနေ့မနက်အတွက် ခင်မိုးလွင်သည် စည်သူစိုးအတွက် ခါတိုင်းလို ကော်ဖီဖျော်မထား၊ နို့ကြက်ဥကို ခွက်ကြီးဖြင့် ကြက်ဥ နှစ်လုံးပင် ထည့်၍ ဖျော်ပေးထားသည်။ မနက်တိုင်းလည်း ကြက်ဥကြော်ကို နှစ်သက်စွာဖြင့် စားတတ်သည်ဖြစ်၍ ကြက်ဥ ဟပ်ဖရိုက်ကို ၅ လုံးပင် ကြော်၍ ပေးထားသည်။
စည်သူစိုးတစ်ယောက် စားပွဲတွင် ဝင်၍ ထိုင်လိုက်တော့ ခင်မိုးလွင်သည် သူ့ကိုကျောပေးလျက် ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ဟင်းချက်စရာများကို ထုတ်၍ အိုးတွင် ပြင်ဆင်ချိန်ပင် ဖြစ်သည်။ သူရောက်လာမှန်းသိ၍ ပြင်ဆင်ပြီးသွားသည့်တိုင်အောင်ပင် သူမသည် လှည့်၍ မလာသေးပဲ ခပ်ကြာကြာလေး အချိန်ဆွဲကာ ကျောလေးပေး၍ အကြည့်ခံနေလိုက်သည်။ ဒီနေ့မနက် စည်သူစိုးတစ်ယောက် နှုတ်ဆိတ်၍ နေသည်ကို သတိထားလိုက်မိသည်။ ခဏနေမှ ခင်မိုးလွင်သည် စည်သူစိုးရှိရာသို့ ဖြတ်ကနဲ လှည့်ကြည်လိုက်တော့ သူသည် သူမ ထင်သည့်အတိုင်းပင် သူမ၏ ခါးအောက်ပိုင်းကို ကြည့်၍ နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရလျှင်ပင် စည်သူစိုးဖက်သို့ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို လှည့်လိုက်ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဟ ကနဲ လုပ်လိုက်ပြီး ခါးလေးကိုလည်း ဆတ်ကနဲ ကော့ပြလိုက်လေသည်။ ပြီးမှ ခင်မိုးလွင်သည် စည်သူစိုးကို တစ်ချက်မျှ ပြုံးပြလိုက်ပြီး သူရှိရာသို့ လှမ်းလာခဲ့သည်။
အနားသို့ရောက်သည်နှင့် စည်သူစိုး ထိုင်နေရာ ကုလားထိုင်ဘေးတွင် ဝင်၍ သူမ၏ လက်တစ်ဖက်ကို ထောက်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်ကို စည်သူစိုးထိုင်နေသော ကုလားထိုင်နောက်မှီကို ကိုင်လိုက်ပြီး သူ၏ဖက်သို့ လှည့်၍ ရပ်လိုက်သည်။ “သား နေမကောင်းဘူးလား” “ကောင်းပါတယ် မာမီ” “ဒီမှာ သား အားရှိအောင်လို့ မာမီ နို့ကြက်ဥနဲ့ ကြက်ဥတွေ လုပ်ထားပေးတယ် စားလိုက်ဦးနော်” “ဟုတ်ကဲ့ မာမီ” ပြောပြီးသည်နှင့် ခင်မိုးလွင်သည် ရှေ့သို့တိုး၍ ကိုယ်ကိုညွှတ်ကာ စည်သူစိုး၏ ပါးပြင်လေးကို နမ်းလိုက်သည်။ သူမ၏ အခုအခံမပါသော ရင်အုံလုံးလုံးလေးတွေက စည်သူစိုး၏ လက်မောင်းတစ်ဖက်ကို ဖိကပ်၍ သွားသည်။ စည်သူစိုးက ချက်ခြင်းပင် လှည့်၍ ခင်မိုးလွင်၏ ပါးပြင် ဖေါင်းဖေါင်းဖွေးဖွေးလေးတွေကို “ရွှတ်” ကနဲ “ရွှတ်” ကနဲ တစ်ချက်မက နမ်းပစ်လိုက်လေတော့သည်။
အခုမှပင် ဒီနေ့မနက် အိပ်ယာထတွင် ခပ်ငေါင်ငေါင် ဖြစ်၍နေသော စည်သူစိုးတစ်ယောက် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖြစ်၍ လာပါတော့သည်။ အလုပ်ကိစ္စရှိ၍ စည်သူစိုးတစ်ယောက် စကားပြောသင်တန်းကျောင်းမှ ပြန်မလာမီလေးမှာပင် အပြင်သုိ့ ထွက်၍သွားသော ခင်မိုးလွင်တစ်ယောက် ည ၈ နာရီ ထိုးကာနီးလောက်မှ အိမ်သို့ ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။ သားအမိနှစ်ယောက် သော့တစ်ချောင်းစီ ကိုင်ထားကြသည်ဖြစ်၍ တံခါးကို ဖွင့်၍ ဝင်လိုက်စဉ်မှာပင် ဧည့်ခန်းထဲတွင်ထိုင်၍ ဗီစီဒီ ကြည့်နေသော စည်သူစိုးသည် ဖြတ်ကနဲပင် ရီမုတ်ဖြင့် ဗီစီဒီကို ပိတ်လိုက်သည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “ဟော မာမီ ပြန်လာပြီ” ပြောလိုက်ရင်းကပင် တံခါးကို ပြန်ပိတ်ပြီး သူ့ကို ပြုံး၍ ရပ်ကြည့်နေသော ခင်မိုးလွင်ထံသို့ စည်သူစိုးသည် ထလာပြီး ခင်မိုးလွင်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို အတင်းပင် ဆွဲ၍ ဖက်လိုက်သည်။
သူ၏ ပုဆိုးအောက်မှ မာတောင်နေသော ဟာကြီးက ခင်မိုးလွင်၏ ဆီးခုံကိုဒိန်းကနဲပင် ဝင်၍ ဆောင့်လိုက်သည်။ ခင်မိုးလွင်၏ မျက်လုံးလေးမှာ မှေးကနဲ ကျ၍ သွားသည်။ ပြီးတော့ ချက်ခြင်း ပြန်၍ ပွင့်လာသည်။ စည်သူစိုးကတော့ သူမ၏ ပါးပြင်လေးတွေနှင့် မျက်နှာလေး တစ်ခုလုံးကို အငမ်းမရ နမ်းနေတော့သည်။ ခင်မိုးလွင်ကလည်း သူ့ခါးကို ပြန်၍ ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားပေးလိုက်သည်။ ခဏနေပြီး နမ်းလို့ အားရသွားတော့မှ ခင်မိုးလွင်၏ မျက်နှာဆီမှ သူ့မျက်နှာကို ခွာလိုက်သည်။ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကိုတော့ မလွတ်မတမ်း ဖက်ထားမြဲပင်။ “သား ထမင်းစားပြီးပြီလား . . “ဟုတ်ကဲ့ . . ” “ဒါဆို မာမီ သွားစားလိုက်ဦးမယ်နော် ဒီည သိပ်ညဥ့်နက်မခံနဲ့နော် မနေ့ကလဲ ညဥ့်နက်တယ် မဟုတ်လား” “ဟုတ်ကဲ့” စည်သူစိုး၏ လက်တွေက ခင်မိုးလွင်၏ ကိုယ်လုံးလေးပေါ် မှ ဖယ်ခွာသွားပေမယ့်လည်း ခင်မိုးလွင်၏ လက်တွေကတော့ စည်သူစိုး၏ ကိုယ်ပေါ် မှ မခွာသေး ဖက်ထားဆဲပင်။
ထို့ကြောင့်ပင် စည်သူစိုးက မျက်နှာလေးကို အသာမော့မော့လေး လုပ်၍ ခင်မိုးလွင်၏ မျက်နှာကို အကြည့်လိုက်တွင်တော့ ခင်မိုးလွင်၏ မျက်နှာက ရုတ်တရက် တိုးကပ်လာရာမှ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများက စည်သူစိုး၏ နှုတ်ခမ်းလေးတွေပေါ် သို့ ဖြတ်ကနဲ ကျရောက်လာရာမှ ခပ်မြှင်းမြှင်းလေး စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ခဏအတွင်းမှာပင် ပြန်၍ခွာလိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်လုံးလေးပေါ် မှ လက်များကိုပါ ဖယ်ခွာကာ ခင်မိုးလွင်သည် လှည့်၍ ထွက်လာခဲ့ပါတော့သည်။ စည်သူစိုးကတော့ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ပြန်၍ ထိုင်ကာ ဗီစီဒီကို ဆက်ကြည့်နေသည်။ ခင်မိုးလွင် အပြင်သို့ မထွက်မီ စည်သူစိုးတစ်ယောက် ပြန်၍ မရောက်ခင်ကပင် သူမသည် မနေ့က ဗီစီဒီ ၂ချပ်ကိုသိမ်း၍ နောက်ထပ် ဗီစီဒီအသစ် ၂ ချပ်ကို လဲ၍ ထားပေးခဲ့လေသည်။ ခင်မိုးလွင်တစ်ယောက် အဝတ်အစားလဲပြီး ထမင်းစားခန်းထဲသို့ လာ၍ ထမင်းစားနေစဉ်မှာတော့ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ဗီစီဒီထိုင်၍ ကြည့်နေသော စည်သူစိုးသည် ခင်မိုးလွင်ရှိရာသို့ ဝင်လာကာ သုံးလေးကြီမ်ထက်မနည်း သူမ အပါးသို့ ရောက်၍ လာပြီး အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာကာ ရစ်သီ ရစ်သီ လုပ်၍ နေလေသည်။
ဒါကို သိပေမဲ့လည်း ခင်မိုးလွင်က မသိချင်ယောင်ဆောင်၍ နေခဲ့သည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက် သူမကို မက်မောတပ်မက်၍ နေသည်ကိုတော့ သူမ၏ ရင်ထဲတွင် ကြည်နူးမဆုံး ဖြစ်၍ နေရပါတော့သည်။ ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ခန်းထဲတွင် စာဖတ်နေသော ခင်မိုးလွင်သည် ည ၁၀ နာရီထိုးကာနီးမှပင် ညအိပ်မီးလုံးလေးကို ဖွင့်၍ မီးများမှိတ်လိုက်ပြီး အိပ်ယာပေါ် သို့တက်၍ လှဲနေလိုက်တော့သည်။ ဒီညတွင်တော့ ညဝတ်အင်္ကျီကို မဝတ်တော့ပဲ ရင်စေ့ လက်ပြတ်အင်္ကျီလေးကို တစ်ထပ်တည်း ဝတ်ပြီး ထမီလေးကိုပင် သူမသည် ဝတ်၍ ထားလေသည်။ ပြီးတော့ အိပ်ယာပေါ် ရောက်တော့ သူမသည် စောင်ကို မြှင့်၍ တကိုယ်လုံးကို ခြုံ၍ ထားလိုက်သေးသည်။ ၁၅ မိနစ် သာသာလောက်သာ ကြာလိမ့်မည်ထင်သည်။ စည်သူစိုးတစ်ယောက် အခန်းထဲသို့ ဝင်၍ လာခဲ့သည်။ သူ ဝင်လာမှန်းသိ၍ မျက်လုံးလေးကိုမှေးကာ ကြည့်လိုက်မိတော့ သူသည် သူမ၏ ကုတင်ခြေရင်းနားတွင် ရပ်ကာ သူမကို မမှိတ်မသုန် ကြည့်၍ နေနေသည်။ စောင်ခြုံ၍ လှဲနေသော သူမကို တခဏမျှ ကြည့်ပြီး သူသည် သက်ပြင်းလေး တစ်ချက်ချကာလှည့်၍ ထွက်သွားလေတော့သည်
။ မကြာမီမှာပင် စည်သူစိုးတစ်ယောက် သူ၏ အိပ်ယာပေါ် သို့ လှဲချလိုက်သည်ကို သိလိုက်ရသည်။ ပြီးတော့ လူးလူး လှိမ့်လှိမ့်လေးဖြစ်ရာမှ စည်သူစိုးသည် ငြိမ်၍ကျသွားလေသည်။ ထိုအခါတွင်မှ ခင်မိုးလွင်သည် စောင်ကိုခွာပြီး အိပ်ယာပေါ် မှ လူးလှိမ့်၍ ညင်သာစွာထကာ ကုတင်ပေါ် မှ ဆင်းပြီး စည်သူစိုး၏ ကုတင်ရှိရာသို့ လာခဲ့သည်။ သူမ တွေးထင်ထားသည့်အတိုင်းပင် စည်သူစိုးသည် ပက်လက်လှန်လျှက် မျက်လုံးနှစ်လုံးကို စုံမှိတ်ကာ ပုဆိုးကို ဖြည်လျော့၍ ချထားပြီး ထောင်မတ်နေသော တန်ကြီးကို သူ၏ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကာ ဆုပ်ကာ ဖွဖွလေး ပွတ်၍ ပေးနေလေသည်။ ခင်မိုးလွင်၏ လက်တစ်ဖက်က တန်ကြီးအပေါ် မှ စည်သူစိုး၏ လက်ပေါ် သို့အုပ်၍ ကိုင်လိုက်လေသည်။
ပြီးတော့ သူ့လက်ကို ဆွဲ၍ ဖယ်လိုက်သည်။ “ဟင် . . မာမီ . . ဟို . . သား . . ဟို . . . ” “သား မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေး နေလိုက် သား ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို မာမီသိတယ်” ဒီတော့မှ အထိတ်တလန့်လေး ဖြစ်၍ သွားသော စည်သူစိုးမှာ ငြိမ်၍ ကျသွားပြီး သူ၏ မျက်လုံးများကို ပြန်၍ မှိတ်ပစ်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါတွင်တော့ ခင်မိုးလွင်သည် စည်သူစိုး၏ ဘေး ကုတင်ပေါ် သို့ ဝင်၍ ထိုင်လိုက်ရာ စည်သူစိုးက တစ်ဖက်သို့ တိုး၍ ပေးလိုက်သည်။
ထိုင်ပြီးသည်နှင့် သူမသည် စည်သူစိုး၏ ပုဆိုးကို ဆွဲ၍ ချွတ်လိုက်သည်။ နောက်သူမ၏ လက်ဖဝါးနုနုလေးဖြင့် ကြွက်သားမြောင်းကြီးများ ထ၍ နေသော မာကြောတောင့်တင်းလှသည့် သူ၏ ပေါင်တံကြီးတွေကို စုန်ကာ ဆန်ကာ ပွတ်၍ ပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ လုံးတစ်၍နေသော စည်သူစိုး၏ ဂွေးအုကြီးကို သူမ၏ လက်ဖဝါးလေးဖြင့် တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် ဆုပ်၍ ဆုပ်၍ ပေးလိုက်ပြီးတော့မှ သူ၏ ပေါင်ခြံနှစ်ဖက်ကို လက်ဖဝါး နုနုလေးများဖြင့် လျှောတိုက်ကာ ပွတ်၍ ပေးလိုက်ပြန်ပါသည်။ သည်နောက်တွင်တော့ ခင်မိုးလွင်၏ လက်လေးကစည်သူစိုး၏ တန်ကြီးကို ဖွဖွလေး ကိုင်လိုက်ရာက ညင်ညင်သာသာလေး ပွတ်၍ ပေးနေသည်။ ပြီးတော့ ဖေါင်းကားနေသော တန်ကြီး၏ ဒစ်ကြီးအောက်ဖက်သို့ သူမ၏ လက်မလေးဖြင့် ဖိကပ်ကာ ပွတ်ပေးသည်။ တခဏအတွင်းမှာပင် စည်သူစိုး၏ တန်ကြီးမှာ ခင်မိုးလွင်၏ လက်အတွင်းမှာပင် အဆမတန် ကြီးထွား၍ လာရလေသည်။
ပြီတော့ သူ၏ တန်ကြီးသည် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ဖြစ်၍ လာရတော့သည်။ သည်တော့မှ ခင်မိုးလွင်၏ လက်ကလေးက စည်သူစိုး၏ တန်ကြီးကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပင် ကိုင်၍ တစ်ချက်ခြင်း ဂွင်းတိုက်ပေးပါလေတော့သည်။ ထိုသို့လုပ်ပေးရင်းကပင် သူ၏ ဒစ်ကြီးအောက်ဖက်သို့ လက်မဖြင့် မကြာခဏ ဖိ၍ပွတ်ကာ ပေးနေသလို ကျန်သော သူမ၏ လက်တစ်ဖက်ကလည်း စည်သူစိုး၏ ပေါင်လုံးကြီးများ၊ ပေါင်ခြံများ အမွှေးနုနုလေးများ ပေါက်နေသည့် ဆီးခုံများပေါ် သို့လည်း ဖွဖွလေးတမျိုး ဖိ၍ တဖုံ ပွတ်ပေးနေသည်။ ဒါ့အပြင် စည်သူစိုး၏ ဂေွး ဥကြီးကိုလည်း သူမ၏ လက်ဖဝါးထဲတွင်ထည့်၍ မကြာခဏ လှိမ့်၍ လှိမ့်၍ ပေးကာ ခပ်ဖွဖွလေးလည်း ဆုပ်နယ်၍ ပေးနေလေသည်။ အတန်ငယ်မျှအကြာတွင်တော့ စည်သူစိုး၏ မို့မောက်နေသော ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးသည် နိမ့်ချီ မြင့်ချီဖြစ်၍ လာရာမှ သူ၏ ပေါင်တန်ကြီးများသည်လည်း လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်၍ လာလေတော့သည်။
ခင်မိုးလွင်သည် လက်တစ်ဖက်က စည်သူစိုး၏ တန်ကြီးကို ကိုင်၍ ဂွင်းတိုက်ပေးနေလျှက်ကပင် သူ၏ ကိုယ်လုံးကြီးဘေးမှနေ၍ သူမ၏ ကိုယ်လုံးအပေါ် ပိုင်းကို စည်သူစိုး၏ ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးပေါ် သို့ မှောက်၍ ချလိုက်သည်။ “သား မာမီကို ဖက်ထားလေ” “အင်း . . . ” စည်သူစိုး၏ လက်နှစ်ဖက်က ခင်မိုးလွင်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်တွယ်၍ လာရင်း သူ၏ မျက်လုံးတွေက ခင်မိုးလွင်ကို ဖွင့်၍ ကြည့်အလာတွင်တော့ ခင်မိုးလွင်၏ ရီဝေ၍ နေသော မျက်လုံးများက သူ့မျက်လုံးများကို စူးစိုက်ကာ ရင်ဆိုင်၍ ကြည့်လာသည်။ ခင်မိုးလွင်၏ လက်တစ်ဖက်က စည်သူစိုး၏ လည်ပင်းအောက်သို့ ထိုးသွင်းကာ ဖက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ လက်ထဲမှ တန်ကြီးကို ခပ်သွက်သွက် ဂွင်းတိုက်ပေးရင်း ခင်မိုးလွင်သည် စည်သူစိုး၏ နှုတ်ခမ်းတွေကို ခပ်မြှင်းမြှင်းလေး စုပ်ပေးလိုက်သည်။
ပြီးတော့ စည်သူစိုး၏ မျက်လုံးများကို စိုက်၍ ကြည့်ပေးပြန်သည်။ ထိုသို့ပင် ခင်မိုးလွင်သည် တလှည့်စီနမ်းကာ ကြည့်ကာ လုပ်ပေးနေစဉ်မှာပင် သူမကို ဖက်၍ ထားသော စည်သူစိုး၏ လက်များက အတင်းကြုံး၍ ဖက်လိုက်သောအခါတွင်တော့ ခင်မိုးလွင်က စည်သူစိုး၏ နှုတ်ခမ်းတွေကို အတင်းပင် ငုံ့၍ စုပ်ပေးလိုက်ရာက သူမ၏ လက်ထဲမှ စည်သူစိုး၏ ကြီးကိုလည်း တအားပင် ညှစ်၍ ဆုပ်လိုက်ပြီး ပြင်းထန်စွာဖြင့် ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်တော့ရာ တခဏအတွင်းမှာပင် စည်သူစိုး၏ ကိုယ်လုံးကြီးသည် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်၍ တက်သွားရာ တန်ကြီးကို ဆုပ်၍ ကိုင်ထားသော ခင်မိုးလွင်၏ လက်လေးပေါ် တွင် နွေးကနဲ နွေးကနဲ ဖြစ်၍ သွားရစဉ်မှာပင် ခင်မိုးလွင်၏ ရင်ထဲတွင် ဟာ၍ သွားရလေတော့သည်။
“မာမီ . . ” “အို . . . . ” ခင်မိုးလွင်၏ ကိုယ်လုံးလေးသည် လန့်ပြီး တုန်၍ပင် သွားရသည်။ သနပ်ခါးလိမ်းအပြီး မှန်တင်ခုံရှေကမှထကာ ဘီရိုထဲတွင် အင်္ကျီရွေးနေခိုက် ဘယ်အချိန်က ရောက်လာမှန်းမသိသော စည်သူစိုးက သူမကို နောက်မှနေ၍ ရုတ်တရက် ဖက်လိုက်သည်ဖြစ်၍ ဗြုံးကနဲဆိုတော့ လန့်၍ သွားရသည် ဖြစ်သည်။ ထမီရင်လျှားလေးဖြင့် ခင်မိုးလွင်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို နောက်ဖက်မှ သိုင်းဖက်ကာထားရင်း စည်သူစိုး၏ မျက်လုံးတွေက သူမ၏ ပုခုံးပေါ် မှ ကျော်ကာ ရှေ့သို့ ဖြူဖွေး၍ ဖောင်းတင်းနေသော နို့အုံကြီးတွေကို တပ်မက်စွာဖြင့် ကြည့်၍ နေသည်။ ထိုသို့ ကြည့်နေရင်းမှပင် စည်သူစိုးသည် သနပ်ခါး မခြောက်တခြောက် စိုဖန့်ဖန့်လေး ဖြစ်၍ နေသော ခင်မိုးလွင်၏ ပါးပြင်လေးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်သည်။ “မာမီ သားငယ်ငယ်တုန်းက နို့မစို့ခဲ့ရပဲ နို့ဘူးတိုက်ခဲ့တာကို ဖေဖေ ရှိတုန်းကပြောတယ် အဲဒါ ဟုတ်လားဟင်” “အင်း . . ” “အင်း . . ” လိုက်ရသော ခင်မိုးလွင်၏ ရင်ထဲတွင် ဒိတ်ကနဲ ဖြစ်၍ သွားရသည်။
“အဲဒါ မာမီရာ ဘယ်လိုနေလဲ စို့ကြည့်ချင်လို့” “ဟယ် ဒီကောင်လေး မကြီးမငယ်နဲ့ ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး” ပြောလိုက်ရသော သူမ၏ ရင်သားတွေပေါ် သို့ ရောက်၍ လာသော စည်သူစိုး၏ လက်လေးကို အထိတ်တလန့်ဖြင့် ဖယ်ချလိုက်မိသည်။ ပြီးတော့မှ ခင်မိုးလွင်သည် သက်ပြင်းလေး တစ်ချက်ချလိုက်ရင်းက “ကဲ လာ . . သား . . မာမီ ပြောပြမယ်” ဟုဆိုကာ စည်သူစိုးကို အနီးရှိ မှန်တင်ခုံတွင် ဝင်၍ ထိုင်စေလိုက်ပြီး သူမ၏ လက်လေးနှစ်ဖက်က စည်သူစိုး၏ ပုခုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ် တွင် တင်ကာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်လိုက်သည်။ “သား တကယ် နို့စို့ချင်လို့လား” “အင်း . . . ” “ကဲ ဒါဆိုရင် စို့ရမယ် . . . ဒါပေမယ့် မာမီ့ ပြောစကားနားထောင်ရမယ်” “ပြောလေ မာမီ” ” “သား ဒီနေ့ကစပြီး ၃ ရက်တိတိ မနက်တစ်ခါ ညနေတစ်ခါ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်၊
ညဘက်ကို ဗီစီဒီ မကြည့်ရဘူး၊ ည ၉ နာရီထိုးတာနဲ့ အိပ်ရမယ် . . ကဲ ဘယ်နှယ့်လဲ အဲဒါကို သားလိုက်နာနိုင်မယ် ဆိုရင် အဲဒီ့ ၃ ရက်ပြီးရင် သားလိုချင်တာပြော ဘာမဆို အကုန်ဖြစ်စေရမယ် . . ခုလည်း နို့စို့ရမယ် သားလိုက်နာနိုင်ပါ့မလား” “ရတယ် မာမီ . . သား လိုက်နာပါ့မယ်” “သေချာရဲ့လား သားရဲ့” “သေချာပါတယ် မာမီရယ်” “ကဲ ဒါဆို ထ . . လာ” ဟု ပြောပြီး စည်သူစိုး၏ လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲကာ ကုတင်ကြီးဆီသို့ ဆွဲ၍ ခေါ် ခဲ့သည်။ ကုတင်ကြီးဆီသို့ ရောက်တော့ ခင်မိုးလွင်က ကုတင်ပေါ် တက်ကာ ပက်လက်လေး လှန်ပေးလိုက်သည်။
“လာ . . လေ” စည်သူစိုး ကုတင်ပေါ် သို့ လှမ်း၍ တက်လိုက်ပြီး ခင်မိုးလွင်၏ ဘေးတွင် ဝင်၍ ထိုင်လိုက်တော့ရာ ခင်မိုးလွင်က စည်သူစိုး၏ မျက်နှာကို ပြုံး၍ ကြည့်လိုက်ရင်း သူမ၏ ရင်ဘတ်ဆီမှ ရင်လျှားထားသော ထမီလေးကို အောက်သို့ လျော့၍ ချလိုက်တော့ရာ စည်သူစိုး၏ မျက်လုံးများက အရောင်တလက်လက် တောက်ပ၍ လာတော့သည်။ ခင်မိုးလွင်၏ နို့လေးနှစ်လုံးမှာ ပေါက်စီလုံးအရွယ် ပမာဏမျှရှိပြီး ဝင်းမတွ်၍ နုညက်ကာ တင်း၍ နေသည့် နို့သီးခေါင်းလေးများမှာတော့ ထောင်တက်၍ နေသည်။ “ကဲ စို့လေ . . ” ခင်မိုးလွင်၏ အသံလေးမှာ တုန်ယင်၍ နေသည်။ သူမ၏ စကားအဆုံးမှာပင် စည်သူစိုးက မှောက်၍ ချလိုက်ရာက သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်လိုက်ရင်း သူမ၏ နို့လေးတစ်လုံးကို ဖိကပ်၍ စို့လိုက်လေတော့သည်။ သူမ၏ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း သူ့ကို ဆီးကြို၍ ပွေ့ဖက်လိုက်သည်။
ခင်မိုးလွင်က သူမ၏ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် စည်သူစိုး၏ လက်တစ်ဖက်ကို လှမ်း၍ ဆွဲကာ ကျန်သော နို့တစ်လုံးပေါ် သို့ စည်သူစိုး၏ လက်ကိုတင်၍ ပေးလိုက်ရာတွင်တော့ စည်သူစိုးသည် သူ၏ လက်တို့ဖြင့် ခင်မိုးလွင်၏ နို့အုံလေးကို ဆုပ်နယ်ဖျစ်ညှစ်၍ ပေးလာလေသည်။ ခင်မိုးလွင်၏ မျက်တောင်ကော့ကြီးများသည် စင်း၍ ကျသွားလေသည်။ စည်သူစိုးကလည်း သူမ၏ နို့အုံတွေကို အားပါးတရပင်စို့၍ နေလေတော့သည်။ “နို့ . . နို့သီးခေါင်းကို လျှာနဲ့ယက် . . ယက်ပေးလေ . . ဟုတ် . . ဟုတ်ပြီ . . ဒီဖက်လက်ကလည်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ချေ . . ချေပေး . . အင်း . . ဟုတ် . . ဟုတ်ပီ” ခင်မိုးလွင်တစ်ယောက် မောဟိုက်ကာ နေရပါသည်။ သူမ၏ အသံလေးတွေပင် တုန်ယင်၍ နေကြသည်။ စည်သူစိုးက ခင်မိုးလွင် ပြောသည့်အတိုင်းပင် လုပ်ပေးသည့်အပြင် နို့နှစ်လုံးကိုလည်း တစ်လှည့်စီ စို့ကာ တစ်လှည်စီလည်း လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ဆုပ်နယ်ပေးလာတော့သည်။ ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ နို့ကြီးတွေကို စည်သူစိုးဆီသို့ အတင်းပင် ဖိကပ်၍ ပေးနေသည်။
သူမ၏ ဒူးလေးနှစ်ဖက်သည်ပင် ထောင်၍ လာပြီး ပေါင်တံကြီးတွေမှာ အတော်ပင် ကားသွားလိုက် စေ့ကပ်သွားလိုက်နှင့် ဖြစ်နေကာ ကြိတ်မနိုင် ခဲမရ ဖြစ်၍နေသော ခင်မိုးလွင်ခမျာ အတော်ပင် သရုပ်ပျက်၍ နေရတော့သည်။ ၁၀ မိနစ်ခန့်ပင် ကြာမည်ဟု ထင်ရသည်။ ထိုအခါတွင်မှ နို့စို့၍ အားရသွားသော စည်သူစိုးသည် သူ၏ မျက်နှာကို သူမ၏ ရင်ဘတ်ပေါ်မှ ခွာလိုက်သည်။ ဗြုံးကနဲ ခင်မိုးလွင်မှာ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို မဖွင့်နိုင်သေး၊ အသက်ကို မှန်အောင် ရှုနေပြီးမှ သူမ၏ မျက်လုံးလေးများကို ဖွင့်၍ ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ သူမ၏ ဘေးတွင် တုန်တုန်ယင်ယင်လေးဖြင့် ထိုင်နေသော စည်သူစိုး၏ လက်ဖျားလေးတစ်ဖက်ကို သူမ၏ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲယူ၍ ကိုင်လိုက်ရာက ခင်မိုးလွင်သည် စည်သူစိုး၏ လက်ဖျားလေးကို သူမ၏ ရင်ဘတ်ပေါ် တွင် ဖိ၍ ကပ်ထားလိုက်ပြီး သူမ၏ မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးမှာလည်း ပြန်၍ မှိတ်သွားလေသည်။
ခဏကြာမှ ခင်မိုးလွင်၏ မျက်လုံးလေးများမှာ ပြန်၍ ပွင့်လာခဲ့ပြီး စည်သူစိုး၏ လက်ကလေးများကို လွတ်၍ ပေးလိုက်လေသည်။ “သား . . စောစောက မာမီ ပြောထားတာတွေကို လိုက်နာရမယ်နော် အဲဒီ ၃ ရက်ပြီးရင် သား ဖြစ်ချင်တာကိုပြော အားလုံး ဖြစ်ရစေမယ် သိလား” “ဟုတ်ကဲ့ မာမီ” “ကဲ သားလည်း သင်တန်းချိန် နီးနေပြီ သွားတော့နော် . . ” သူမကို ခေါင်းညိမ့်ပြပြီး အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်သွားသော စည်သူစိုး၏ ကျောပြင်ကြီးကို မျက်စိတဆုံး ငေးကြည့်ရင်း သူမ၏ မြင်ကွင်းထဲမှ စည်သူစိုးတစ်ယောက် ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှ ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ လက်ကလေးတစ်ဖက်ကို ထမီထဲသို့ လက်လျှိုသွင်းကာ ပေါင်ရင်းခွဆုံသို စမ်း၍ ကြည့်လိုက်သည်။ စောက်ရည်လေးများ ရွှဲရွှဲနစ်နစ်လေး ဖြစ်၍နေသည်ကို စမ်းလိုက်မိတော့ ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို တွန့်ကာ အံတစ်ချက် ကြိတ်လိုက်မိပါတော့သည်။
စည်သူစိုးတစ်ယောက် ခင်မိုးလွင်၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ ရောက်တော့ ၃ နှစ်သားပင် ရှိသေးသည်။ တကယ်တော့ စည်သူစိုးသည် သူမ၏ ခင်ပွန်း ဦးမောင်မောင်စိုးဖက်မှ ပါလာသော လင်ပါသားပင်ဖြစ်သည်။ စည်သူစိုးအခါလည် အရွယ်မှာပင် သူ၏ မိခင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး စည်သူစိုး ၃ နှစ်သား အရွယ်တွင် ဦးမောင်မောင်စိုးနှင့် ခင်မိုးလွင်တို့ ညားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နဂိုကပင် ကလေးချစ်တတ်သော ခင်မိုးလွင်က စည်သူစိုးကို ချစ်ရှာပါသည်။ ဒီကြားထဲ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးကပါ ကွယ်လွန်သွားတော့ စည်သူစိုးအပေါ်တွင် ပို၍ပင် ဂရုဏာသက်ခဲ့ရသည်။ လှဆဲ၊ ချောဆဲ၊ နုပျိုဆဲ ဖြစ်သော ခင်မိုးလွင်သည် ယောက်ျားကွယ်လွန်ပြီးချိန်မှ ယခုထိ ၅ နှစ်တာကာလတွေကို သူမ၏ သွေးသားများအား အနိုင်နိုင် ထိန်းချုပ်၍ ခက်ခဲစွာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသည်။ ထိုတစ်နေ့က စည်သူစိုးနှင့် ကေသီချိုတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ကစားနေတာကို တွေ့မြင်လိုက်ရာမှစ၍မိန်းမချင်းဖြစ်သော ကေသီချိုကို မနာလိုဖြစ်မိသည်။ စည်သူစိုးကို သဝန်ကြောင်လိုက်မိစဉ်မှစ၍ သူမ၏ ငုတ်လျှိုး၍ နေခဲ့ရသော ကာမသွေးများသည် သွေးတိုးစမ်းလာခဲ့သည်။ တကယ်ဆို စည်သူစိုးကို သူမဆိုင်သည်။ ပိုင်ခြင်းပိုင်လျှင် သူမကသာ ပိုင်ရမည်ဟု ခင်မိုးလွင် တွေးမိသည်။
ဒါကြောင့်ပင် အရိုင်းသက်သက် စည်သူစိုးကို ကာမနှင့် ပတ်သက်သည်တို့ မြင်ဘူးအောင် ဗီစီဒီတွေကို တစ်ဖက်လှည့်ဖြင့် ကြည့်စေသည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ ကိုယ်ခနာကို တပ်မက်လာစေရန်နှင့် သူမကို တွယ်တာလာစေရန် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တဖန် သူမအပေါ် တွင် စည်သူစိုးတစ်ယောက် ရဲတင်းလာအောင် သူမကပင်စ၍ ရဲရဲတင်းတင်း နေပြလိုက်သည်။ အခုဆိုရင် သူမပြောခဲ့သည့် ၃ ရက် ပြီးဆုံး၍ ၄ ရက်မြောက်ညသို့ပင် ရောက်ခဲ့ပြီး ညနေက စည်သူစိုးကို လေ့ကျင့်ခန်း မကစားစေပဲ ဗီစီဒီ ၂ ချပ်ကို ခပ်ပြောင်ပြောင်ပင် ထုတ်၍ ကြည့်စေခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် သုံးရက်အတွင်းကဆိုရင် စည်သူစိုးတစ်ယောက် သူမကို အဝေးမှ ကြည့်၍ အရိပ်တကြည့်ကြည့်ဖြင့်နေပုံကို ပြန်၍ မြင်ယောင်ရင်း ခင်မိုးလွင် ပြုံးလိုက်မိသေးသည်။
သူ ဗီစီဒီကြည့်နေချိန်ကျမှ ခင်မိုးလွင်က ရေထချိုးပြီး ယခု အလှပြင်နေသည်။ ပြင်တာမှ အလှုပွဲ ဧည့်ခံပွဲ ပွဲနေ ပွဲထိုင်တွေကို သွားမည့်သကဲ့သို့ပင် ချယ်မှုန်း၍ ပြင်ဆင်နေလေသည်။ ပြီးသည်နှင့် သူမ၏ ကိုယ်ပေါ် သို့ ညဝတ်အင်္ကျီပါးပါးလေး တစ်ထည်ကို တစ်ထပ်တည်းဝတ်ပြီး ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ထဲတွင် လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှ ခင်မိုးလွင်သည် ဆယ်ကျော်သက်လေးပမာ ဖျတ်လတ်တက်ကြွစွာဖြင့် စည်သူစိုးရှိရာသို့ ထွက်၍ လာခဲ့လေသည်။ ဧည့်ခန်းထဲသို့ လှမ်းဝင်လိုက်သည်နှင့်သူမကို လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်သော စည်သူစိုးမှာ ဗီစီဒီကို ပိတ်ရန်ပင် မေ့၍ သွားရတော့သည်။ အနားသို့ရောက်သည်နှင့် သူမသည် နှစ်နှစ်ကာကာလေး ပြုံးပြလိုက်ပြီး စည်သူစိုး၏ နံဘေးတွင် ဝင်၍ ထိုင်ချလိုက်ကာ စည်သူစိုး၏ လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲ၍ သူမ၏ ခါးလေးကို ဖက်စေလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ သူမသည် စည်သူစိုး၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ တိုးဝင်လိုက်ရင်း စည်သူစိုး၏ မျက်နှာကို တမိန့်တမော မော့၍ ကြည့်နေသည်။ စည်သူစိုးကလည်း သူမ၏ မျက်နှာလေးကို ငုံ့၍ ကြည့်နေသည်။
ပြီးတော့မှ စည်သူစိုး၏ မျက်နှာက ငုံ့၍ ကျလာပြီး နီစွေးရွှမ်းစိုနေသော သူမ၏ နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို ညင်ညင်သာသာပင် စုပ်ယူ၍ နမ်းလိုက်လေတော့ရာ ခင်မိုးလွင်ကလည်း သူ၏ ကျောပြင်ကြီးကို ဖက်တွယ်၍ သူ့နှုတ်ခမ်းများကို ပြန်၍ စုပ်နမ်းပေးလိုက်သည်။ အတန်ကြာအောင် အနမ်းရေယာဉ်ကြောတွင် မျောနေခဲ့ပြီးတော့မှ သူတို့၏ မျက်နှာနှစ်ခုတို့သည် တစ်ဦးကို တစ်ဦး တပ်မက်စွာ ကြည့်ရင်း ခဲခွာသွားလေ တော့သည်။ “အိပ်ခန်းထဲ သွားကြမယ်ကွာ . . ” တိုးလွန်းသော ခင်မိုးလွင်၏ အသံလေးမှာ တုန်ခါ၍နေသည်။ ပြောပြီးသွားပေမယ့် ခင်မိုးလွင်သည် စည်သူစိုး၏ ရင်ခွင်ထဲမှ မထပေ။ ပြီးမှ သူမသည် စည်သူစိုး၏ မျက်နှာကို မျှော်လင့်တကြီးကြည့်ရင်း “ပွေ့ခေါ် ပါလားဟင်” ဟု ပြောလိုက်လေသည်။
အခန်းထဲရောက်သည်နှင့် ကုတင်ပေါ် သို့ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တင်ပေးလိုက်စဉ်မှာပင် ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ ညဝတ်အင်္ကျီလေးကို ချွတ်၍ ပေးလိုက်သည်တွင် စည်သူစိုးသည် သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို အငမ်းမရ ကုန်း၍ စို့ပါလေတော့သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် ခင်မိုးလွင်၏ လက်က စည်သူစိုး၏ ပုဆိုးနှင့် အင်္ကျီတွေကို ချွတ်၍ ပေးအပြီးတွင် နို့တွေကို ကုန်း၍ တပြန်စီစို့နေသော စည်သူစိုး၏ လက်တစ်ဖက်ကို ဖောင်းကားပြုနေပြီဖြစ်သော သူမ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ် သို့ တင်၍ ပေးလိုက်ရာ စည်သူစိုးက ဆုပ်လိုက် ပွတ်လိုက်ဖြင့် လုပ်ပေးနေပါတော့သည်။
တဖြေးဖြေး ရမက်တွေ သည်းထန်လာ ရသော ခင်မိုးလွင် တစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ မအောင့်အင်းနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်၍ လာရတော့သည်။ “စည်သူ ကုတင်အောက်ကို ဆင်းလိုက်” စည်သူစိုး ကုတင်အောက်သို့ ဆင်း၍ သွားစဉ်မှာတော့ အားရပါးရ အလိုး ခံရန် ရည်ရွယ်ထားသော ခင်မိုးလွင်သည် လီး တဆုံးဝင်သည့် ကုတင်တစောင်းနည်းကိုပင် ရွေးချယ်၍ ထားခဲ့သည့်အတိုင်း သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ကုတင်ပေါ် တွင် ကန့်လန့်ဖြတ်အိပ်ကာ လုံးတစ်နေသော ဖင်သားကြီးများကို ကုတင်စောင်းတွင် တင်၍ ပေါင်လေးနှစ်ချောင်းကို ကားပြီး ကုတင်စောင်းတွင် တွဲလောင်းလေး ချထားလိုက်မိသည်။ အမွှေးလေးတွေ ရိပ်၍ ထားသဖြင့် ဖွေးဖွေးလေး ဖြစ်နေကာ အဆမတန်ပင် ဖောင်းကား၍ တင်းမာကာစောက်ရည်ကြည်လေးများပင် စိမ့်ထွက်စီးကျ နေပြီဖြစ်သော ခင်မိုးလွင်၏ စောက်ပတ်ကြီးကို မမှိတ်မသုန် ကြည့်၍ နေရင်းက စည်သူစိုးသည် သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ဝင်၍ တိုးကပ်လာလေတော့ရာ ခင်မိုးလွင်၏ လက်တစ်ဖက်က စည်သူစိုး၏လီးတန်ကြီးကို ဖမ်း၍ ကိုင်လိုက်ရာကလီးတန်ကြီးထိပ်ဖြင့် သူမ၏ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတလျောက် ပွတ်တိုက်၍ ပေးနေသည်။ စောက်စိလေးနေရာကို ခပ်ဖိဖိလေး ပွတ်၍ ပေးသည်။
ပြီးတော့မှ စည်သူစိုး၏လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်ဝတွင် တေ့ပေးလိုက်သည်။ “လုပ် . . လုပ်တော့လေ . . . ဟင့် . . ” ညုညုလေး အချွဲလိုက်တွင်တော့ စည်သူစိုး၏ လီးတန်ကြီးက သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဗြိကနဲ တိုးကာ တဆုံးဝင်၍ သွားလေတော့ရာ အလုိး ခံရသည်မှာ နှစ်နဲ့ချီပြီး အသစ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင် ခင်မိုးလွင်၏ ခါးလေးမှာ ကော့၍ တက်သွားရလေသည်။ ထိုစဉ်မှာပင် ထိတွေ့လိုက်ရသော အရသာကြောင့် ရမက်စိတ်တွေ ဟုန်းကနဲ ကြွ၍ လာရသော စည်သူစိုးသည် သူမ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လှမ်း၍ ဆွဲလိုက်ရာက အားရပါးရပင် ဆောင့်၍ လိုးပါလေတော့သည်။ ခင်မိုးလွင်ကလည်း အောက်မှနေ၍ သူမ၏ စောက်ပတ်ဖြင့် စည်သူစိုး၏ လီးတန်ကြီးကို ညှပ်၍ ညှစ်၍ ဆွဲကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို တအင်းအင်း တအဲအဲဖြင့် ကော့၍ ကော့၍ ပင့်တင်ပေးနေလေသည်။ စည်သူစိုး၏ ပြင်းထန်လှသော ဆောင့်ချက်များကြောင့် ခင်မိုးလွင်၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြစ်ကာ တုန်ခါနေရသလို နှစ်ယောက်အိပ် ကုတင်ကြီးပင် လျှင် တကျွီကျွီဖြင့်အော်မြည်၍ နေရလေသည်။
ခင်မိုးလွင်ကလည်းအားရလိုက်သည်မှာ မပြောပါနှင့်တော့။ အပျိုစင်လေးတစ်ယောက် အလိုး ခံရသလိုပင် တဟင်းဟင်းဖြင့် ဖြတ်ဖြတ်လူးနေသည်။ သူမ၏ နို့တွေကို ဆုပ်နယ်၍ နို့သီးတွေကိုချေမွတာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ခံနေရလေတော့ ခင်မိုးလွင်၏ တစ်ကိုယ်လုံးသည် အရသာတွေ အီစိမ့်၍ နေရသည်။ စည်သူစိုး၏ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လိုက်သည်မှာ မပြောပါနှင့်တော့။ လီးတန်ထိပ်ကြီးက သူမ၏ ရင်ဝထိပင် ဝင်သွားရပြီး ဆောင့်လိုက်တိုင်း သံချောင်းကြီးလိုဖြစ်နေသော လီးတန်ကြီးက သူမ၏ စောက်စေ့လေးကို ဖိကြိတ်သလိုဖြစ်ကာ ကျင်၍ တက်ကာ အသည်းခိုက်အောင် ခံစားရလေသည်။ သည်ကြားထဲမှ သူမမှာ တစထက် တစ အားမလိုအားမရ ပို၍ဖြစ်လာရသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးတွင်လည်း ချွေးစေးလေးတွေ ပျံနေချေပြီ။
“သား . . အင့် . . စည် . . သူ . . ဆောင့် ဆောင့်စမ်းပါ မောင်ရယ် . . မာမီ . . အင်း . . မမ စောက်ပတ်ကြီး ကွဲသွားအောင်ကို ဆောင့်လိုက်စမ်းပါ . . အမလေး . . ဟင်း . . ဟင်း . . မောင် . . မောင် . . ရယ် . . ချစ် . . ချစ်တယ် . . ဟင်း . . ဟင်း . . ” ထိအု ခိုက်မှာပင် အရသာများ အီစိမ့်လာကာ ကာမဆိပ်များတက်၍ လာရသော စည်သူစိုးကလည်း သူ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ရှိရှိသမျှအားကို ညှစ်ထုတ်ကာ အားကုန်ဆောင့်၍ လိုးလိုက်ပြီး မကြာမီမှာပင် . . “အမလေး . . မောင် . . မောင် . . ဟင်း . . ဟင်း . . ဟင်း . . ကျွတ် . . ကျွတ် . . ကျွတ် . . ” ဟု ခင်မိုးလွင်၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ တွန့်ခါ၍ သွားရစဉ်မှာပင် စည်သူစိုးသည်လည်း သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ခင်မိုးလွင်၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ တဆုံးပင် ထိုးစိုက်၍ ဖိကပ်လိုက်ပြီး သူ၏ ခါးကြီးမှာ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ကော့ကာ ကော့ကာ ဖြစ်၍ သွားရလေတော့သည်။ သူမ၏ သားအိမ်ထဲတွင် နွေးကနဲ ဖြစ်သွားစဉ်ကပင်စ၍ စည်သူစိုး၏ သုတ်ရည် ပြစ်ပြစ်ခဲခဲများကို ခင်မိုးလွင်သည် သူမ၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားလေးများဖြင့် ဖျစ်ညှစ်လျှက် ဆွဲငင်လျှက် မက်မောစွာဖြင့် သားအိမ်အတွင်းသို့ စုပ်ယူနေပါလေတော့သတည်း . . ..ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မကျမောစှာဖွငျ့